Ukuphononongwa kwabathengi koonodoli bezesondo
Isondo unodoli Ngexabiso
$ 500- $ 800 uphononongo loonodoli
$ 800- $ 1200 uphononongo loonodoli
$ 1200- $ 1500 uphononongo loonodoli
$ 1500- $ 1800 uphononongo loonodoli
$ 1800- $ 2200 uphononongo loonodoli
$ 2200- $ 2500 uphononongo loonodoli
$ 2500- $ 3000 uphononongo loonodoli
Lonke uhlolo lweeDolls zoSondo
Ukuba ufuna ngokwenene ukuthenga oonodoli bethu, kodwa kusekho izinto ezikuxhalabisayo. Ungeza apha ukuze ubone uvavanyo lwabanye oonodoli. Mhlawumbi izimvo zabo kwiimveliso zethu zinokukunceda. Kunjalo. Siyakwamkela wonke umthengi ukuba ashiye izimvo zakho apha. Indumiso yakho iya kuba sisiqinisekiso sethu esikhulu. Siza kwamkela ngokufanelekileyo iingcebiso zakho. Sinethemba lokuzisa inkonzo engcono kubathengi bethu.
I-165CM Athena Iinwele eziFutshane eziSayizi eziPheleleyo zeNdebe yeNdebe eSondo yoVavanyo
Njengoko enye ipowusta ibonakalisile, lo nodoli ubonakala emhle kakhulu. Kodwa kubonakala ngathi abo bamthengileyo bonwabile kwaye bagcine imali, kwaye eyona ndleko yeedoli imalunga ne- $ 1,500. Ndizithanda zonke iinkcukacha kunye neempawu abazongeza kwimveliso. Inkonzo ebalaseleyo yabathengi kunye nempendulo yombuzo okhawulezileyo. Ixabiso likhulu kakhulu. Kumava am, uninzi loonodoli balo mgangatho zibiza kakhulu. Kufana nokuthenga isiqingatha se- $ 2,000 unodoli wesondo! Idili elungileyo, unodoli omkhulu, kunye nomthengisi omkhulu!
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 03:01:24 ngu-Uriah Wright
Funda Iingcebiso Iinkcukacha Product
I-158CM i-Eunjin yeenwele eziMnyama eziSitayile esineSilicone esiPhezulu soPhando ngoSondo
Lo ngunodoli wam wesibini. Le ibetha enye. Ixabiso elifanelekileyo kakhulu lemali. Inkonzo evela kwinkampani yeyesibini kuye !! Unodoli wam wokuqala (ovela kwenye inkampani) uthathe iinyanga ezi-2 ukuza apha, kwaye amathambo akhe awanamandla njengalo. Ukuba ufuna ukuthenga unodoli wesini, ngaba ndonelisekile yile nto ndiyithengileyo? Unganqikazi ukusebenzisa le nkampani. Basebenza kakhulu apho. Yonke into kwakhona !! Mthande! Qiniseka ukuba ujonga konke unodoli wesondo imifanekiso ngononophelo. Eyokugqibela yile uya kuyifumana. Nceda uqaphele ukuba ayifanelekanga njengomfanekiso ongaphambili. Isilumkiso nje.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:57:52 nguChristiana
I-165CM iSalome Imilo eQinisekisiweyo yeRZR isitayile D yeNdebe yeDoll yoPhononongo
Lo nodoli ungcono kunokuba ubhengeziwe. Kusemthethweni kwaye kuyinyani, amabakala esinyithi ebakala lonyango, kwaye ipapashwe ngokupheleleyo ngokwentengiso. Ukongeza koku, ukuhambisa kuyakhawuleza kwaye kuyalumka (akukho iilebheli okanye imifanekiso ebhokisini). Kodwa kungcono, umthengisi ulunge kakhulu kunxibelelwano. Ukuba uyafuna, unokucela oonodoli abaza kwenziwa kwaye baya kukwenzela. Qinisekisa ukuba ubathumelele i-imeyile. Unodoli wam khange wenzakaliswe, kwaye njengoko bendicelile, zonke izinto endizenzileyo endizicelileyo kwi-imeyile zikhawuleze, kwaye zafika kwakamsinya. Umthengisi uphendula ngokukhawuleza, uvulelekile kunxibelelwano, kwaye akunike kanye le nto uyifunayo. Khawukhumbule ukukhankanya. Isiphumo esibi kuphela soku unodoli wesondo bunzima (bunzima kakhulu), kodwa oku kulungile kum kuba ubunzima bayo buyenza inyaniseke ngakumbi kwaye yomelele.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:54:28 nguCedric Harper
I-160CM Kitto Texture ebonakalayo eJapan Style D yeNdebe yeDoll yoPhononongo
Ixabiso elichanekileyo lemali. Iwigi yam yegolide ayizisanga, kodwa ibinayo iwigi etshisayo. Ikwanayo nesifudumezi somngxunya kunye nelayisi emhlophe, efanelekileyo kakhulu. Isikhalazo sam kuphela kukuba sinokuhlala somelele ngakumbi, kodwa ngexabiso elifanelekileyo. Ndanxibelelana nenkampani kwaye ndenza utshintsho kuyo. Bayenzile ngaphandle kwamathandabuzo. Ngenxa yolu tshintsho, kucingelwa ukuba kuya kuthabatha phantse inyanga ukufika apha, ewe, ukusukela ngosuku lokuqala endimyalele ngalo, lafika ngaphakathi kweentsuku ezisi-8. Yonke into endiyicelileyo! Makhe ndikuxelele ... unodoli wesondo zithambile, zinomtsalane kwaye ziyanelisa kakhulu!
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:50:27 nguJack Craigie
I-160CM iDora emnyama yeenwele isitayile saseAsia E iNdebe yeDoll yoPhononongo
Wayenxibe iwigi emnyama (ndisazama ukufumana indlela yokusebenzisa / ukucoceka / isitayile ngokuchanekileyo) kunye nesiketi esincinci esimhlophe esimhlophe se-Sailor / umongikazi, umphambili wesinqe esinqunyiweyo ngaphambili, imitya yengalo kunye nomnqwazi wohlobo lomnqwazi. Ndayalela nezinye iimpahla (zonke iimpahla zincinci kakhulu, iziphumo zakhe zemilinganiselo zidwelisiwe kwincwadi yemiyalelo). Amabele akhe makhulu kwaye anempilo, kodwa ubukhulu beempahla ngokubanzi bunokusetyenziselwa iintloko ezincinci. Ndincoma ukunqanda ukugoba okuntsonkothileyo okanye okuqinileyo, kubandakanya imikhono, kuba kunokuba nzima ukutyibilika kwezinto kwi unodoli wesondoiingalo ngaphandle kokugoba iindawo zabo kancinci. Izinto ezilahlekileyo okanye i-elastic zezona zilungileyo kwiincopho.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:46:58 nguBowman
I-160CM uCaroline Mfutshane uBrown weenwele isimbo esinyanisekileyo soPhononongo lweBele leSondo
Ukuba ujonga into yokudlala ukwanelisa umnqweno wakho wesini amaxesha amaninzi ngemini (andizukugweba), ayizukuba lolona khetho lufanelekileyo, kuba bekusoloko kunzima ukumhambisa kwaye kufuneka umcoce (ukuba ndifuna ukuba aqhubeke ixesha elide, oku kunyanzelekile). Ukwenza utshintsho oluncinci kwindlela yakhe yokuma kunye nokuma kwakhe kuthetha ukumphakamisa (zonke iiponti ezingama-59) kwaye umbeke kwaye uhambise imilenze yakhe endaweni yayo. Ngayiphi na imeko, kum, lo msebenzi ungumbono ongaphezulu kwento yokudlala ngesondo, nangona kunjalo unodoli wesondo ngokuqinisekileyo ukubonelela ngeethoyi zesondo.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:43:30 ngu-Armand
I-160CM i-Yasuko yeenwele eziMnyama eziHlangeneyo eJapan isitayile soMnwe soLuntu
Elona candelo lilungileyo malunga nesi siqwenga kukwenziwa ngokwezifiso. Ngokucacileyo, ungathenga naziphi na iimpahla ozifunayo, kodwa abavelisi baya kwenza iintloko ezininzi ezahlukeneyo, ukuze ukhethe ukuba yeyiphi oyithandayo kakhulu kunye naziphi na iewigi onokuzifumana. Umvelisi uya kuqaphela ukhetho lwakho lwethoni yolusu, umbala wamehlo kunye nezinye izinto ezincinci. Ndenze izicelo ezilula, kwaye kulula, ke andiqinisekanga ukuba bakulungele kangakanani ukuya ngokwesiko unodoli wesondo (ngaphandle kwendleko ezongeziweyo).
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:40:03 ngu-Ingemar Blake
I-157CM iSimona yeZinwele eziMthubi zeenwele zabaFundi B zeNdebe yeDoll yoVavanyo
Uku-odola, ukuhambisa, ukwenza ngokwezifiso kunye nenkonzo yabathengi konke kulungile. Ibhokisi enkulu (ekunokuba nzima ukuyiphatha, ke zilungiselele ukuphakamisa) ifika emnyango wendlu yam endaweni yeholo langaphambili, elilungile. Lo ngunodoli wokuqala wobomi endinawo, ngumsebenzi ocacileyo. Unzima kunezinye iidoli ezibhalwe kufutshane nokuphakama, kwaye ngokoluvo lwam zingcono kwaye ziyinyani. Logama nje umamkela ngokuchanekileyo kwaye umxhasa ubunzima, unokwenza nantoni na. Musa ukumkhetha ngengalo okanye ngemilenze, zama ukusasaza iziko lakhe lomxhuzulane kunye nobunzima, kuba ukubamba indawo yokunyusa kuya kubangela ulusu unodoli wesondo ukukrazula amathambo esinyithi.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:35:30 nguFitch Quiller
I-146CM i-Sheila yeenwele ezinde isitayile saseAsia Ukuphonononga amabele amaDolls
Idoli intle, kodwa ikwathathe ixesha elincinci. Ngokubanzi, ndonelisekile yiyo. Eyona nto ikhangeleka ibhetele kunomfanekiso. Kuphela kwempazamo endifuna ukuyithetha kukuba ubufazi kunye nomngxunya wangasemva awubekwanga ngokuchanekileyo kwicala elifanayo le-anatomy yabasetyhini. Uninzi lweemingxunya ezimpundu zibekwe phakathi kwezidlele zeempundu, kwaye unodoli ubekwe kude ezantsi kwawo. Umngxunya welungu lobufazi ubekwe ngqo phantsi kwesikrufu. Ngaphandle kokuba kwenziwe olu tshintsho, ukubekwa kwindawo yokuthuthuzela kunye nolonwabo kunqunyelwe. Kubonakala ngathi umntu owenza unodoli akazange alale nomntu obhinqileyo ngenxa ye-anatomy. Ngokubanzi, iyawenza umsebenzi, kunye unodoli wesondo intle.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:30:30 by
I-158CM Kimiko Brown yeenwele isimbo saseJapan esiBele esiBanzi esiPhezulu ngoPhononongo lweDoll
Umthengisi wayeluncedo kakhulu kwaye isantya sokuhambisa sidlulile kulindelo. Dlulisa iinkcukacha kunye nemiyalelo. Nabani na onomdla wokuqala ingqokelela, le yeyona doli yokuqala. Inkonzo yabathengi yayihle kakhulu njengoko bendilindele. Ukuba ngunodoli wakho wenqindi, kuyakubakho igophe lokufunda xa ushukuma kwaye umbeka. Ewe unzima, kodwa wanelisekile. Ndithumele iifoto kunye neevidiyo, kodwa andikayifumani inkxaso. Baqhubeka bebaleka beza ngakum. Ndiceba ukuthenga ngaphezulu unodoli wesondo kule nkampani.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:26:22 nguLandon
I-170CM yeLotus yeGrey yeZinwele eziMdaka zaseTshayina isitayile esincinci soPhononongo lweSondo
Ufanele imali. Umele ukuba wahlukile emfanekisweni, kodwa besele ndiyazi ukuba iza kungena. Nangona kunjalo, usakhangeleka emhle kwaye enomdla. Njengoko kukhankanyiwe kolunye uluvo, imingxunya yakhe ayibekwanga ngendlela eyiyo, kodwa usenokuyifumana. Wayexinene kwaye enzima. Inzame encinci yokuqhuba. Andonelisekanga ngeli nqanaba lamaxabiso, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba kuya kwenzeka ntoni. Thumela ngononophelo kwaye ngokukhawuleza. Imveliso egqwesileyo. Njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Akukho ziphene okanye iingxaki. Thenga ngokuzithemba. Amaxabiso ezinto ezinkulu. Inzima kakhulu kunokuba bendicinga. Isondo unodoli uya kuthatha idayi kwiingubo ezimnyama.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:20:32 nguGordon
I-145CM Shannon Mnyama yeenwele I-EVO Isitayile esiPinki seLips zoPhononongo
Ndayilandela ngomonde loo phakheji de yayokufika endlwini yam. Ndenze uphando oluninzi koonodoli be-tpe ngaphambi kokuba ndithenge le, kufuneka nditsho ukuba ndonelisekile ziziphumo. Unodoli awunasiphako. Amabele akhe mahle kwaye athambile, kwaye ubuso bakhe bubuhle. Ndiyathemba ukuba unamehlo aluhlaza endaweni yomdaka. Unzima, ke ukuba uceba ukumthenga, lungiselela imithambo efanelekileyo. Ndicebisa ukuba wolule. Kodwa ayisiyonto inkulu leyo. Ndingathi ixabiso lakhe liphelele. Ukuchukumisa kwakhe kuthambe kakhulu, kwaye ngokoluvo lwam, ungcono kune unodoli wesondo kwintengiso. Ndincoma lo mthengisi kwaye ndiyathemba ukuba bangandinika iliso elitsha.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:16:12 nguBob Bertie
I-145CM Lazuli Iinwele ezimthubi Isimbo saseYurophu Ikhathuni yoPhononongo lweSondo seDoll
Ndingumlandeli wamanga kwaye ndiyithanda kakhulu i-18 kwi-Dragon Ball. Lo nodoli ubuyisela ngokugqibeleleyo zonke iinkcukacha. Enkosi urdolls. Andinasikhalazo nakanjani kwaye ndiyamangaliswa yinkonzo ebalaseleyo yabathengi kunye neprojekthi uqobo. Umntu opheleleyo oqhagamsheleneyo uhlala enxibelelana kwaye uqinisekisa ukuba yonke into ime ngendlela, bathumele i-wig eyongezelelweyo kwaye akukho ngcebiso yamehlo, yonke into ikhawuleza kakhulu kunokuba bekulindelwe okanye imiyalelo. Ngokubhekisele kwi unodoli wesondo ngokwayo, igqithe konke okulindelweyo, inyani kwaye inika umdla. Ngokuqinisekileyo yicebise.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:11:39 yiWashington
I-155CM Dana Dierser Iinwele ezimfutshane iSitayile esineSoft eQinisekisiweyo yoPhononongo lweSondo oSondo
Le yimveliso yodoli ekumgangatho ophezulu. Ndamangaliswa kakhulu kwaye ndothuswa ziinkcukacha zayo. Emva kophando oluninzi kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, ndafumanisa ukuba eli lixabiso elifanelekileyo. Ngayo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo malunga nemveliso, ii-urdolls zikwabonelela ngenkonzo ebalaseleyo kubathengi. Abathengi abonelisekileyo. Mncinci kum, kwaye ke ndiyayithanda indawo esembindini kunye nokumisa idokhi, kuba uninzi lwenu lungaluthanda olo hlobo lwezinto, ukuza kuthi ga ngoku kujongeka ngathi yinkampani enkulu, ixabiso elikhulu, ishushu kakhulu, ndiyacinga unodoli wesondo iya kuba ngamaxesha amnandi, xa ufuna umntu ukuba abe nawe lol.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:06:04 nguMonroe
I-160CM Miyuki emnyama yeenwele i-EVO isitayile F yeNdebe yeDoll yoPhononongo
Ndingathi ndikufutshane nezinto ezinjalo. Kodwa ngokunyanisekileyo, olu lukhetho olufanelekileyo. Uyakuba ngunodoli omkhulu, mfana omncinci ndingu 6 iinyawo 4 kodwa ndaye ndadibana nomfazi kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye yayiziinyawo ezi-5 1 ke ndathi nantoni na ndamfumana nangayiphi na indlela. Uswiti kakhulu kwaye uyathandeka. Kuba ndingumlinganiswa wokuqala unodoli wesondo, ulungile kwaye ulindele ukuba kunye naye. Ndiyazithanda izimvo zenkampani kunye nemisonto ofuna ukunceda kuyo yonke imiba. Ndifumene i-imeyile.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 02:01:07 nguRodney
I-160CM iBhete eNwele yoNwele yeNdlu eyi-168 yoPhononongo oluNkulu lweeSondo zoPhononongo
Ungowam ngoku! Iindleko zokuhambisa zikhawuleza kakhulu, ndizifumene iimpahla endandizifuna kwiintsuku ezingaphantsi kwe-15. Xa ndamamkelayo, yayiyibhokisi enkulu, kwaye iimveliso ezisebhokisini azizange ziphawulwe. Xa ndavula ibhokisi, ndafumanisa ukuba unodoli ukhuselwe kakuhle ngaphandle komonakalo. Ulusu lonodoli luthambile. Nangona kunjalo, kukho ioyile encinci. Kodwa ayinamsebenzi ukuba uyayisebenzisa. Emva konyango nge-talc, igrisi iphuculwe kakhulu. Amalungu e unodoli wesondo ziyabhetyebhetye kwaye zinokubekwa kwindawo efanelekileyo. Kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba inkonzo yabathengi ilunge kakhulu. Ndonwabile kakhulu ukuthenga.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 01:56:14 ngu-Arthur Webb
I-150CM iJessica ebomvu yeenwele isimbo saseYurophu esiLuhlaza Imilebe yokuPhononongwa kweDoll
Ixabiso elihle kakhulu lemali. Ulusu lwakhe luziva lukhulu kwaye mhle kakhulu. Unokuba mkhulu kancinci kwaye ubuso bakhe buya kujongeka buvuthiwe. Lilonke, kulula ukuyisebenzisa kwaye igcinwe ngononophelo. Ingacebisa nabani na. Ixabiso liphinde libe ngumgangatho omangalisayo. Eli liqhinga elenziwa ngezi zinto-> isitatshi sengqolowa yeyona mhlobo wakho usenyongweni. Ulibale i-talcum powder. Emva kokuhlamba ulusu kunzima ukubamba. Faka isitatshi sombona ukwenza ulusu luthambe Ukuba awuqinisekanga malunga nokulawula ubungakanani obupheleleyo be-150cm unodoli wesondo, Enye yazo icetyiswa kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 01:51:58 nguStanley
I-150CM ye-Eirian Grey yeenwele isimbo samaJapan esiBanzi esiPhezulu soPhononongo lweSondo
Nangona enzima kakhulu, unzima kakhulu. Ndiyavuya ndiyifumene le. Ndizakufumana unodoli opheleleyo, kodwa ndeva ukuba kunzima ukuzilawula. Ndiyacinga ukuba unodoli oneengalo nemilenze unokuba nzima kangakanani. Oku kunesifuba sesinyithi samathambo kunye nentloko enzima. Akukho zikhalazo konke konke. Iza ngebhokisi ephindwe kabini, kodwa nebhokisi yoqobo kuthiwa yenziwe e-China. Enye i-wig iinwele ezinde-enye iyasika, kodwa kuye kwafuneka ndinciphise ii-bangs ukuze ndibone amehlo akhe. Ubonakala eyinyani, iimpawu zakhe zilungile kakhulu, amabele akhe aqinile, mhle unodoli wesondo unembongolo encinci, eneenkcukacha, uyazi.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 01:47:19 nguWilde
I-150CM i-Akira Grey yeenwele isitayile saseJapan se-EVO Version yoPhononongo lweSondo
Oku kakuhle. Ayifani nevumba elinexabiso eliphantsi lerabha njengeefektri zemichiza. Ubuso buhle kakhulu, kwaye i-eyelashes yokwenyani ine-eyeliner. Kukho isithuba sentambo entloko ukuba ufuna ukudibana nomzimba. Intamo yomzimba ikwaluliwe ukuze ukwazi ukujongisa intloko yakho ngaphambili okanye ecaleni (ngokumangalisayo). Iiwigi ezimbini, izixhobo zokucoca, iiglavu ezimhlophe, ikama ukuba ufuna ukuyinxiba, kunye neepijama ezimbini ezineepanty. Andizukwazi ukoyisa iinkcukacha zamashiya amnyama kwaye i-eyelashes yokwenyani ayipeyintwanga kwiinkophe, amehlo afaka kwaye ungayibeka kwakhona unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 01:42:23 nguBenedict
I-148CM u-Antonia uSimon oLuhlaza weenwele ze-EVO isitayile esikhulu sokuHlolwa kwesondo
Ndithenge le mveliso kuba inobuso obuthandekayo. Ubuso bufana nomfanekiso. Ndiyaneliseka kakhulu ngokuthenga kwam. Ndicinga ukuba kufanele ukuba ndibhatale i $ 100 eyongezelelweyo ngesisu esikhulu, kodwa encinci inamehlo aluhlaza kuphela, ajongeka emangalisa. Imveliso enkulu, inyani kakhulu. Kuziva kumnandi, njengoko benditshilo, unodoli uyinyani! Ndingathanda ukuba nomzimba omkhulu kunye nobuso obuvuthiweyo kancinci, kodwa ndilungile. Kukho ubunzima obuncinci bokusebenzisa ubufazi kunye nemingxunya yangemva-nje "ndibeka njani unodoli wesondo ukwenza oku ", kodwa kukhanya ngokwaneleyo ukuba kungasetyenziswa. Lilonke, yimveliso ekumgangatho ophezulu.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-07 01:38:19 nguCarey Dillon
I-146CM i-Betty Malan yeenwele eziMthubi i-Big Ass isimbo se-EVO yoVavanyo lweDoll
Ukuba ufuna ukuxhoma unodoli ngelixa uleleyo, khetha unodoli omkhulu, omkhulu ngokwaneleyo ukwenza ukuba ucinge ukuba uxhoma umzimba wokwenene. Mhle kakhulu, ndiyathanda ukumjonga, mhle kakhulu kwaye uyacaphuka. Sebenzisa umgubo wosana kunye neoyile ukwenza ulusu lwakhe luthambe kwaye luthambe. Wayenxibe i-wig ebomvu, njengeefoto kunye neewigi ezimfutshane zesilivere-ngwevu. Andiphoxeki. Hayi ubunzima okanye ukukhanya. Yenza uphando malunga nokuba ungathatha njani unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:50:50 nguRalap Tony
I-156CM i-SaSa yeenwele eziMnyama zaseJapan isitayile esincinci sebele soPhononongo
Ewe, bendikunye nalo modeli iinyanga ezininzi. Omeleyo mkhulu. Ijongeka iyinyani. Ukuchukumisa kubhetele kancinci kunokusebenzisa. Intliziyo iyinyani-ngamanye amaxesha ibhetele kuneyokwenene. Nangona ukuhlamba ngokwakho kubuthathaka, kulula ukucoceka usebenzisa isisombululo esiza nayo. Emva kokuyisebenzisa kambalwa, amashiya am awe, kodwa andinaxhala kakhulu. Emva kokusetyenziswa okuphindaphindiweyo nokucoca, akukho ziphoso zesikhumba zifunyenweyo. Imveliso enkulu ukuba unayo indawo yokuyigcina kwindawo engenakufunyanwa ngabanye. Isikhalazo endinaso kukuba i unodoli wesondoUbuso buselula.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:46:39 ngu-Stan Swift
I-172CM Motooka Mayumi Mfutshane Iinwele eziNtshontsho kwiJapan Isimbo samaBele aBanzi aHlola amaDoll
Ke unodoli ujongeka ngcono kunokuba bendicinga. Ndiyikhuphile ngaphandle kwebhokisi, ndayibeka ekoneni yebhedi yam, ndabeka izandla zam emva kwayo ndayityhalela kwindawo ehleliyo, ndasonga umqolo wam phakathi. Andiqinisekanga ukuba ndinento embi. Hlela: Thetha kwisebe lenkonzo yabathengi, bathumele iarhente entsha ngaphakathi kweentsuku ezi-3. Akukho ngxaki ngale. Inkonzo yomthengi intle kakhulu. Intloko yedoli intle kwaye intekenteke; umzimba wodoli ulunge kakhulu kwaye imilo inkulu njengenkcazo. Ngenxa yoyilo olulula, xa ndicocekile kwaye ndiyigcina, ndiyakwazi ukubamba unodoli wesondo ngesandla esinye. Emva kokuhlamba kokuqala, iphunga liphantse lingabikho.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:42:52 ngu-Anna
I-168CM Yuko Hanawa Izinwele eziMnyama zaseJapan isitayile esiBele esiKhulu esiBonisa ngoSondo
Iyakugcoba ukuthungwa ... kwaye andizukuzama emlonyeni okanye kwilungu lobufazi kuba imilebe ebhityileyo inokunyibilika okanye ikrazule kwaye itshabalalise ubuso bayo obuhle iya kuba lihlazo. Ukuhlamba kubonakala kulula, ukomisa akunjalo. Andazi ukuba ndenze njani. Ukuba ndisebenzisa itawuli okanye i-microfiber iyakususa ezinye izinto zangaphakathi ... Ndiyazi ukuba ingavakala intle okanye imbi kwaye ingazodlula izibonelelo, kodwa jonga nje kuye. Yiza nekati yakho oyithandayo epokothweni unodoli wesondo niye edolophini.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:37:11 nguShelley
I-170CM Leila Tobias Iinwele ezimfutshane Isitayile saseAsia Ukuphonononga amaBele amaDoda aPhambili ngeSondo
Intle kakhulu le ntombazana. Umfanekiso wam uchanekile ngombala wakhe. (Akukho sihluzo okanye nantoni na) Uza nebhikini kunye nohlobo lwempahla yangaphantsi, iiwigi ezimbini kunye nekama. Ngezi zizathu, ndayinika iinkwenkwezi ezine. Ingxaki endadibana nayo kukuba umngxunya mncinci kakhulu. Ngokwenyani, iincam zam ezincinci. Ewe iyazolula, kodwa yindlela exineneyo. Isisombululo esinokubakho-ndibeka isinyithi esigobileyo emngxunyeni wempundu ndasifudumeza sade sasishushu kakhulu umnwe wam (awushushu kodwa awufudumali), ngeloxesha ndawucima. Ndiyenzile amatyeli aliqela kude kube ngoku unodoli wesondo umngxuma waba mkhulu, kodwa uqinile.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:30:49 nguAngelo
I-170CM Miwako Iinwele ezimfutshane Isitayile saseJapan esiPhambili ngeSondo esiDlwengulayo
Ukuba oku kukuthenga kwakho okokuqala, ndicinga ukuba yifowuni elungileyo yokusebenzisana nee-urdolls. Kuqala kubonakala kubiza, kodwa imveliso ilingana nedoli ebiza kakhulu, kwaye isenokuvela kuludwe lwempahla. Ukuba awunamava ngalo naluphi na uhlobo lweemveliso zabantu abadala, ndicebisa ukuba usebenzise iimveliso ezincinci, ekulula ukuzilungisa ukuze uziqhelanise nazo. Lo nodoli uyinyani ... umenza azive engaqhelekanga ukuqokelela uthuli. Cinga nge unodoli wesondo njengeepropathi ezingaqhelekanga okanye ifenitshala!
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:24:15 by Noel Harte
I-145CM Natasha Mthubi weenwele isimbo saseYurophu D iNdebe yamabele Ukujongwa koonodoli bezesondo
Emva kokufunda ezinye iiforamu malunga nolawulo lomgangatho, bendiqale ndathandabuza ukuthenga kwii-urdolls, kodwa banikezela ngeenkwenkwezi ezintlanu okwangoku. Kunzima ukukholelwa ukuba ixabiso eliphantsi ngokuthelekiswa neeyunithi ezifanayo zabanye abathengisi. Ungayichazanga eyokuba ngengomso yeza ngegolide. Ixesha lokuguqula uninzi lwabathengisi ziiveki ezi-4-6. Ukupakishwa kunqumle kwaye kulawulwa ngokufanelekileyo yi-UPS. Olona phawu kuphela apha kukuba unolungelelwaniso oluncinci lweempawu ezithile, kodwa ukuba uphawula kumthengisi ndiqinisekile ukuba banokuziqhelanisa nezinto ezithile unodoli wesondo ukhetho (umbala we-wig, umbala wamehlo, ngapha koko ndiyakholelwa ukuba yinto engaqhelekanga).
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:20:06 nguWoodrow
I-145CM Kiki Brown yeenwele isitayile saseAsia D-iNdebe yoPhononongo lweSondo
Unodoli wesini yile nto ujongeka ngayo kwifoto! Ewe, ezi foto zinokukhanya okuninzi kunye nemvelaphi, kodwa inkangeleko ikwabonakala ngokucacileyo. Ukugqabhuka kukhulu kunokuba bendilindele, kodwa ndothukile. Idoli ikwalingana nesakhelo sematrasi, esimalunga ne-intshi ezingama-23 zesibhengezo esingezantsi. Ndigcinile umqamelo we-foam angena kuwo, ukuze kube lula ukumhambisa ekhaphethini ngaphandle kokonakalisa unodoli wesondo. Ukuba nenye inokuba yinto ekudlalelwa ngayo kwabanye abantu, ke ukucwangcisa malunga nokugcinwa kunye nemfihlo ngamanyathelo amabini alungileyo ngaphambi kokujika enye. Kodwa musa ukulalanisa ukuthembeka konodoli, yifihle naphina!
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:14:53 nguCleveland
I-145CM iRita Berkeley yeenwele eziMnyama isitayile saseAsia Ukuphonononga iiDoll zesondo
Ndicinga ukuba kufuneka ndiyichaze apha. Ukuphakama koku unodoli wesondo Ngaba i-145cm. Umzimba ubhityile kakhulu kwaye ubhityile. Oku kuyenza lula kwaye kube lula ukuhambahamba. Ubuso bedoli bincinci kakhulu. Umncinci kakhulu, ke iifoto ezithunyelwe zichanekile, ke zigwebe ngobulumko ngokuthelekiswa nabanye onodoli. Ukuba le yingxaki, nceda unxibelelane nomthengisi kwaye ucele iintloko ezingaphezulu ezibonakala ngathi zezabantu abadala, ziyafumaneka kwaye zinokutshintshwa ngokulula ngokwazo, ziyajija zivaliwe.
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:09:04 nguAndre
I-145CM Miyu Iinwele eziMthubi zaseAsia Isitayile esikhulu sokuBelekisa amaDoda eSondo
Wowu! Entle unodoli wesondo. Iinkcukacha eziyinyani. Iinyawo nezandla ezichanekileyo, kubandakanya nokusetyenziswa kweenzipho neenzipho. Ubuso obuhle nomzimba, ulusu olukhanyayo kakhulu. Amathambo ajijekileyo ayamangalisa! Onke amalunga ahamba kuhambo oluchanekileyo lokuhamba, kwaye ukujikeleza kweenyonga, amagxa, amadolo, kunye neengqiniba zigobile zajika ngendlela echanekileyo. Amalungu omelele ngokwaneleyo ukulungiselela nasiphi na isikhundla asibekayo. Kubonakala ngathi kuhle kakhulu. Amaxabiso obugcisa amangalisayo!
Umhla owongeziweyo: 2020-04-06 23:03:32 nguGilbert
Iinwele eziNgwevu 158CM Rin Isondo soMdli woPhengululo
Yonke into ikwimeko egqibeleleyo. Ndiyazithanda iiwigi zakhe kunye nempahla yakhe yangaphantsi. Ngokuqinisekileyo ndiza kucebisa lo nodoli wesini kuye nakubani na ovulekileyo. Ukuhamba ngobulumko kuya kuba ngumceli mngeni. Nangona kunjalo, ifanelwe yonke ipenny. Inani loonodoli lithelekiswa nelamantombazana aneminyaka eli-18 ubudala. Kwakulungile kum. Enye idoli yam yayiyi-5 yeenyawo ezi-2 intshi egobile unodoli onzima. Bekuhanjiswa ngokukhawuleza, kupakishwe, iminwe ibuthathaka kakhulu, kwaye iingcingo bezincinci kakhulu kwaye kulula ukuzaphula. Inkqubo ye- unodoli wesondo iguquguqukayo kwaye ilunge kakhulu, ndiyathemba ukuba ndingafumana ukhetho lokuma. Njengoko kuchaziwe. Unodoli wokuqala ukuthenga. ndonwabe kakhulu. Isifuba sinokuba buthambile kodwa asibi; iinkcukacha ezilungileyo. Eyoyikekayo njengomfanekiso, njengovalo njengentombi enyulu, kuthatha ixesha ukophula ixabiso, umgangatho kunye nemveliso.
Umhla owongeziweyo: 2019-11-25 01:58:01 nguLennon
Iinwele ezimthubi I-161CM Kaede yeDoll yoDliwano loMthengi
Ndiyayithanda le doli. Ukuba ndingayinika iinkwenkwezi ezi-6, ndikulungele. Ufike kwangethuba kunokuba bekulindelwe. Yonke into ikwimeko egqibeleleyo. Ndiyathanda ukufaka iiwigi kunye nempahla yangaphantsi. Ngokuqinisekileyo ndiyakucebisa oku unodoli wesondo kuye nabani na onengqondo evulekileyo. Ngelishwa, ndabujongela phantsi ubungakanani bayo, ke ukuhamba ngononophelo kuya kuba ngumceli mngeni. Nangona kunjalo, ifanelwe yonke ipenny. Unodoli uhambelana nenani lamantombazana aneminyaka eli-18 ubudala. Yanele mna, enye idoli yam yi-5ft 2 intshi egobile unodoli onzima, malunga neepawundi ezili-120, ke oku sisiqabu esihle, indawo leyo ayinasiphelo. Mhlawumbi i-gymnast yaseTshayina eneminyaka engama-21 yinto efanelekileyo yokuthelekisa.
Umhla owongeziweyo: 2019-11-25 01:52:11 ngu-Elton Gilbert
Iinwele ezinde 148CM Vita Roy Isondo soDoli Ukuphonononga uMthengi
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, imveliso iyakhawuleza kwaye iyakhawuleza. Xa umphathi ophethe iFedEx efika nonodoli, qiniseka ukuba usekhaya. Ndincamathisela ifoto apha njengesampulu. Ndizakufumana abanye oonodoli apho, kodwa obu bubuso obundenza ndizive ndimhle kakhulu. Ayinampahla iboniswe apha, kodwa ungafumana nayiphi na ishushu unodoli wesondo Iindleko ezivela kwii-urdoll ezifana nam. Ubungakanani bempahla ngu "S" okanye buncinci. Ngovuyo lwam, ndaphantse ndalibala ukongeza ukuba inkonzo yabo yabathengi ilungile!
Umhla owongeziweyo: 2019-11-25 01:44:21 by Allen
Iinwele eziGotyiweyo 165CM Ukuphonononga uMthengi ngeDoll
Ngokucacileyo ayithathi indawo yobunyani, kodwa iyavuya kakhulu. Ndifuna ukwenza uphando oluthe kratya kulondolozo ngaphambi koku-odola, kuba kufuneka ndithenge ezinye izinto ezininzi ukumnceda ukumgcina, ndiyathemba ukuba angahlala ixesha elide, ke andikhathali ngokwenza oku. Akukho mfuneko yokuba ndihlawule iindleko ze unodoli wesondo, kodwa kungathatha iveki okanye ngaphezulu. Kukho amava amnandi ngeenxa zonke. Awuyi kuzisola! Lo nodoli ulungile, ndikulindele kancinci ngenxa yexabiso eliphantsi kakhulu, kodwa ndiyamangaliswa ngumgangatho wakhe.
Umhla owongeziweyo: 2019-11-13 04:27:57 by Hiram Nick
Uluhlaza okwesibhakabhaka i-170CM uCecilia Arthur Sex Doll Ukuphonononga uMthengi
Ndichithe ixesha elininzi ndithenga unodoli wesondo, ngakumbi xa ndabona ukuba bathengise ngexabiso elingaphezulu kwe- $ 1, kwaye emva kokukhangela okuninzi, ndafumanisa ukuba ixabiso sisiqingatha kuphela. Izinto endizilindeleyo ziphantsi ngelo xabiso, kodwa ukuba andithandi, ubuncinci andilahlekanga mali ingako. Ukungena kwayo, ndaqala ukuyidibanisa. Ingcinga yam yokuqala yayikukuba wow, inzima kakhulu le. Ingcinga yesibini wow. Ndicinga ukuba le nto isisidenge. Emva kokunxiba i-wig kunye nokuhlala phezulu, ndiye ndaqonda ukuba ijongeka ingcono kunokuba bendicinga. Andizukuthi ijongeka njengefoto, kodwa ijongeka intle. Ndikwi 'monk mode' kwaye bendivela kubafazi okwethutyana, eli liqabane elilungileyo. Ndine-dopamine encinci kunye nezinye iihormoni zilele ecaleni kwam, ke yayintle ijikelezile.
Umhla owongeziweyo: 2019-11-13 04: 17: 01 nguSmedley
Iinwele ezityheli 170CM uMarcia Austin weSondo woPhononongo loMthengi
Ke unodoli ujongeka ngcono kunokuba bendicinga. Ndiyikhuphile ngaphandle kwebhokisi, ndayibeka ekoneni yebhedi yam, ndafaka isandla sam ngasemva ndasityhalela kwimo yokuhlala, ndithetha nesebe lenkonzo yabathengi, bathumela iimpahla ezingaphezulu. Oku kuyintengiselwano ngaphandle kweengxaki. Inkonzo yomthengi intle kakhulu. Cinga nje ngesixhobo esingaqhelekanga okanye ifenitshala! Ekuphela kwento endinokukhalaza ngayo kukuqina kwebhokisi, kodwa ndiyathemba ukuba uyakhululeka ekuhambeni kwexesha. Lilonke, oku unodoli wesondo ixabisa imali kwaye ihanjiswa ngokukhawuleza okukhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-09-17 04:02:42 nguChanning Katrine
Iinwele ezinde ezimnyama ezi-148CM zoRuiya zesondo zoPhononongo loMthengi
Bekufanele ukuba ndiyale kwangoko. Intle ngendlela emangalisayo. Indlela elindelweyo ingcono. Ndimncinci kakhulu kubhere wam waseHollywood. Zenziwe ngezinto ezikhuselekileyo kwaye zicocekile kakhulu nangaphandle kokukhuselwa. Ndingayibukela kangangeeyure. Iwigi yahlukile kumfanekiso kodwa intle. Iimpahla zangaphantsi ezibandakanyiweyo zikhulu kakhulu, kodwa ulindele ntoni simahla? Ukuba ndiphinde ndiyenzile, ndiza kuma. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho bungozi baziwayo bunxulunyaniswa unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-08-23 03:21:50 nguGene Roy
Iinwele ezimnyama 100CM Kelly Max Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Iingono zibonisiwe apha kwaye ziyafana nomzimba. Ungazifumana njani iinwele ezimnyama kunye namehlo amnyama kwiifoto endizithengileyo. Ixabiso lakhe lisinika ukuzinza. Ubungakanani besakhelo kunye nolwakhiwo zahlukile! Iiwigi ziyothusa! Ndimenzele isithende! Kuya kufuneka ndilinde unodoli wakho wesini ukuze ekugqibeleni ndibuye ekhaya. Ngoku lixesha lokuba ufunde izinto ezimbalwa malunga I-TPE sex doll kunye neengcebiso kunye nezikhokelo zokufumana oonodoli besini ababalaseleyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-08-23 03:11:12 nguDaniel Edmund
Iinwele eziBlue 165CM uLydia Forster weSondo woPhononongo loMthengi
Iphakheji ihanjisiwe ngaphandle kokumakisha ngaphakathi. Ulumke kakhulu, umfana wezothutho wayecinga ukuba ngumpu wokhuseleko. Njengoko bekulindelekile, imibuzo emininzi ihlala iphakanyiswa kwinkqubo yokwenza esi sigqibo sibalulekileyo. Ndiyayithanda ngcono kunentombi yam yangaphambili lol kuba ibiza ixabiso eliphantsi kwaye iithoyi zam azisayi kuthi hayi, azongezwanga. Iimveliso ezilungileyo zithandeka. Ngaphezulu unodoli wesondo kusenziwa, abantu abaninzi nangakumbi baqala ukukholelwa ukuba kulungile ukuba unodoli omnye okanye ababini besini.
Umhla owongeziweyo: 2019-08-23 03:01:35 ngu-Isaac Wordsworth
Iinwele ezimthubi 165CM U-Leona Herbert Sex Doll Ukuphonononga uMthengi
Akukho ngxaki ukuthenga kubo kwakhona. Olu luphawu I-TPE sex doll imveliso. Njengoko bekulindelekile, imibuzo emininzi yaphakanyiswa kwinkqubo yokuthatha esi sigqibo sikhulu kwaye ndothuka kakhulu kwaye ndothuswa ziinkcukacha zesakhiwo. Emva kophando oluninzi kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, ndiye ndafumanisa ukuba eli lixabiso elifanelekileyo. Banikezela ngenkonzo ebalaseleyo kubathengi kuyo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo malunga neemveliso zabo. Abathengi abonelisekileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-08-23 02:50:51 nguSidney Willard
Iinwele ezityheli I-150CM yeDana Dierser yeSondo yoDoli yoPhononongo loMthengi
Unodoli wayengekho onzima kum, kodwa ingxaki yayilivumba lemoto entsha. Iya kuhamba. Ukuwolana kubalulekile. Ubuso obuhle, amabele adlamkileyo, aqinile, amaxabiso aphezulu, unodoli wesondo ungaze ukhohlise, ulume, okanye uthi hayi. Okokugqibela, emva kokuqwalaselwa kwayo yonke imiba yengxaki, ndiza kuthatha isigqibo esifanelekileyo kunye nesisengqiqweni. Ngaphezulu kokuba bendilindele. Mhle ngandlela zonke. Ndonwabile ukuba ekugqibeleni ndophukile ndaza ndaza apha. Umthengi onelisekile.
Umhla owongeziweyo: 2019-08-23 02:41:45 by Arthur Alerander
Iinwele ezimnyama 160CM Stacey Bacon Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Endleleni, kum, inobunzima obuncinci i-80 yeepawundi, kwaye ke ndiyathanda ukuba phakathi nendawo, kuba uninzi lwezinto onokuzithanda, ukuza kuthi ga ngoku kujongeka njengenkampani enkulu, ixabiso elikhulu, oonodoli besini abathandanayo Ndicinga ukuba uya kuba lixesha elihle, xa ufuna umntu oza kuhlala nawe, ahleke ngokuvakalayo. Esona sigqibo sokuthenga i unodoli wesondo inzima ngokwayo, kwaye ungathatha ixesha elide ukuyenza.
Umhla owongeziweyo: 2019-08-23 02:28:42 nguHenry Bray
UBrown Eyes 160CM uSabina Coleridge weSondo woPhononongo loMthengi
Oku kuthengisa kakhulu kwaye kuyimveliso. Nangona kungekho ngaphandle kweziphene, kuyinto entle kakhulu yesondo, ngakumbi ngokwexabiso. Ewe bekukho ivumba elincinci ekuqaleni, kodwa le yinto eqhelekileyo yazo zonke iimveliso ezenziwe yi-TPE. Iya kuncipha ngokuhamba kwexesha (kwaye kudlule iiveki ezimbini) ngokuhlamba okufanelekileyo kunye nokucocwa. Isihlahla sibuthathaka. Ezintle zinkulu. Ngexesha leholide ephambeneyo, oonodoli bahanjiswa ngaphambi komhla othenjisiweyo. Ukuhanjiswa kwefayile ye- unodoli wesondo iyafana nomzimba ochanekileyo, iinwele zakhe kunye namehlo aluhlaza ngokwesiko.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 05:40:57 ngu-Peter Hutt
Amehlo amakhulu i-100CM Vita Tony Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
UVita ngunodoli wesini endijonge kuye. Kuqala kwinto zonke, ndifuna ukuthi ufike kwangoko kunokuba bendilindele (kwiiveki ezimbini kamva). Ngaba le yinto elungileyo okanye embi? Kulungile, ewe, ndinomdla omkhulu wokuba afike. Ayilunganga, kuba bendingekho edolophini ukufika kwam, kuye kwafuneka ndivumele abamelwane baqwalasele ipasile yakhe ndide ndibuye. Sele ndiyithethile le, yenye yezona zinto zithengiweyo endizenzileyo. Ngokubhekisele kwinkangeleko yakhe, usondele kakhulu kwisampulu yomfanekiso. Iifoto zam ziya kubonisa umohluko ocashileyo. Amashiya akhe ahluke kancinci, kwaye imilebe yakhe ikhangeleka yahlukile, kodwa oku kunokuba nefuthe kwi unodoli wesondo Nxiba kuluhlu.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 05:31:09 by Chad Defoe
Iinwele ezinde ezimdaka ngeBrown I-100CM kaJuni yoSondo ngoDliwayo
UJuni Doyle ujongeka ngokufana nesithombe. Uyinto entle encinci. Ndamnika inkohliso ende emnyama, ubonakala ngathi ngumdlali weqonga weTV / imvumi. Umgangatho ulungile ukuza kuthi ga ngoku, kodwa andenzanga nto kuye. Uye wachopha esitulweni ngakwidesika yam wathula. Undinike owona mlingane ulungileyo. Ndidinga ukumthengela iimpahla ezimbini kuphela, umntwana uphakathi ngokomlinganiselo, akazange amse naphi na, akazange akhalaze. Wahlala nje apho kwaye wayenencwadi emnandi. Ndiza kuthenga enye unodoli wesondo njengomlingani wakhe.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 05:23:12 by Todd Orlando
I-Big Ass 163CM uPhononongo loMthengi weSondo loSondo
Njengoko abanye besitsho, ubunzima bedoli yesondo (iipawundi ezili-106) ngumkhwa, kodwa ayisiyonto yonakalisayo. Uya kuhlala. Nje ukuba uyiqonde kakuhle, amalungu ayo kulula ukuhamba, kodwa hlala apho ufuna khona. Ulusu lwakhe olungaphandle kwebhokisi lunemvakalelo yokugcoba, kodwa ubume obuthambileyo bufana nolusu. Nje ukuba acocwe kwaye acocwe, ulusu luziva lumangalisa ngokwenene. Andikhange ndibone naliphi na ivumba leekhemikhali emzimbeni wakhe. Ndilungiselela elandelayo yam unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 03:54:21 nguBarry Bacon
I-Blue Eyes 150CM iZoe Ralph Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Ukufumana kwam unodoli, ndawukhangela umzimba wakhe andafumana zinyembezi okanye mabala. Oku kufanele ukuba kulindelwe kuba wayegcwaliswe kakuhle kwibhokisi eyayithunyelwe. Nangona unodoli osefotweni ene-braid yegolide, ndine-wig ende, ethe ntsho emdaka yeenwele egqibeleleyo kuye kwaye ibonakala ikumgangatho osemgangathweni. Ubuye nesibini sangaphantsi esimhlophe, esilinganayo, kunye nomsinga ofudumeleyo. Oku akukhankanywanga kwiphepha, ke oku kuyinzuzo. Intloko yedoli intle kwaye intekenteke; i unodoli wesondoUmzimba ulunge kakhulu kwaye ubume bukhulu njengenkcazo.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 03:45:00 nguNoel Ivan
Iinwele ezimthubi eziYile eziyi-150CM uBridget Whittier weSondo woPhononongo loMthengi
Lo nodoli wesini yile nto ndiyifunayo. Bendihlala ndikhangela kwiibhodi zemiyalezo eyahlukeneyo ye-TPE kwi-Intanethi. Kubonakala ngathi ixutywe ngempazamo neenkampani zomgunyathi ezingabizi kakhulu. Ezi nkampani zikhohlisa nje uluntu. Ndiyasiqonda isizathu, kuba amaxabiso abo asezantsi kakhulu. Kodwa ngokungafaniyo nenkampani yobuqhetseba, ii-urdolls bezikunye nam, ndixelele ukuba iphakheji sele ithunyelwe (kunye nenombolo yokulandela umkhondo yeFedEx) ukubona indlela endithanda ngayo idilesi yesilicone yesini, ukuba ndinemibuzo okanye iingxaki. Ungaqhagamshelana nabo.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 03:35:25 by Donahue Norton
Iinwele eziMthubi eziMthubi eziMthubi ezi-150CM uWanda Hoover uPhononongo loMthengi woSondo
Le yidoli entle yesini, intle kodwa inzima, igcwele inyani, yanele ukuba liqabane elithe cwaka. Ukuqikelela nje ubungakanani beempahla ukuze ndimnxibe kwangoko. Kubonakala ngathi iimpahla zalo ezincinci zilinganisa umlawuli. Olu lupopi lwesithathu endinalo, olona mgangatho uphezulu kunye neenkcukacha. Ukuba ufuna ukuxhoma unodoli ngelixa ulele, khetha enkulu unodoli wesondo inkulu ngokwaneleyo ukuba ikwenze uzive ukuba ubambe umzimba wokwenene.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 03:24:01 nguJulius Burns
Iinwele ezinde 148CM Astrid Jane sex Doll Ukuphonononga uMthengi
Ndiyinxalenye kaMormoni, ulongezo oluhle kumfazi wam wangoku. Xa isetyenziswa ngokudibeneyo neepijama zeAstrid, ulungile kumboniso wothando lomculo wasekholejini. Ukwangumboniso wefilimu okanye ipropu. Xa ubonakalisa ngakumbi le mvakalelo yesinyithi kunye neemvakalelo zabasetyhini, iya kwenza abahlobo bakho badideke, kwaye baya kuyifumana kuwe. Ndiyayithanda le nto intle yobugcisa kwaye ilungile idilesi yesilicone yesini. Ndiyathemba ukuba iimfuno zakho nazo ziyafezekiswa ngaye.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 03:14:20 nguCorey Ted
AmaBlue Eyes 146CM Maggie Harte Sex Doll Customer Ukuphonononga
Unodoli wesini ufika ngaphambi komhla oqikelelweyo. Andiqinisekanga ngento ezakwenzeka. Ndiyazi ukuba ayikhangeleki "iphelele" njengefoto, kodwa ndiyothuka xa ndiphumile ebhokisini, ikufutshane njengoko injalo. Izinwele ezingaqhelekanga kunye nokulayisha. Ndiza kwenza ntoni ngokwahlukileyo? Ndiyathemba ukuba ndingafumana into kuluhlu oluphezulu. Ukuba unako ukuyifumana, lukhetho olufanelekileyo ukunika unodoli wesondo unyawo lokuma. Owu, ekugqibeleni, njengoko kuchaziwe. Wow inzima kunokuba bendicinga, ayisiyonto imbi leyo. Ndixelele nje ukuba ndikhubazeke ngakumbi kunokuba bendicinga.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 03:04:47 ngu-Osborn Tobias
Imilebe e-Thin 146CM Yedda Phawula uMdli weSondo woPhononongo loMthengi
Ndiyayithanda le doll yesini yokwenyani, uyinto entle yobugcisa kunye nokudlala okugqwesileyo. Andiyithandi indlela ekunzima ngayo ukushukuma nokunxiba ngenxa yobunzima bayo. Ndiyisebenzisa ukwehla. Elona xesha ndilithandayo! Kufana nokukhangela umsebenzi kumdlalo wakho. Le yindawo yokuqala yokuzoba ekuthengeni kwam oku unodoli wesondo. Imilebe yentloko yedoli ityebile kwaye ithambile, kwaye intloko iyajijwa endaweni kwaye ibanjwe ngokuchanekileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-07-04 02:57:21 ngu-Abel Maurice
I-Flat Chest 100CM I-Asao Miko Sex Doll yoMthengi
Ndifumene lo nodoli wesini izolo, ufana ngqo nefoto. Le nto intle intle. Beka inkohliso ende emnyama kuye, ujongeka ngathi ngumdlali weqonga weTV / imvumi. Umgangatho ulungile ukuza kuthi ga ngoku, kodwa andenzanga nto kuye. Uye wachopha esitulweni ngakwidesika yam wathula. Owona mlingane ubalaseleyo. Thenga nje iingubo zakhe ezimbini zokunxiba, umntwana uphakathi ngokomlinganiselo, akazange amse naphi na, akazange akhalaze. Wahlala nje apho kwaye wayenencwadi emnandi. Kwicala lokulungisa, yonke into ilungile. Kufana nesiphelo esiphakamileyo idilesi yesilicone yesini. Amalungu akhe aqinile ngokwaneleyo ukugcina indawo, kodwa anokuhanjiswa ngokulula. Iminwe neenzwane zikhululekile kwaye zithambile. Lilonke, ndonelisekile.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-19 02:49:55 ngu-Byron Caroline
Iinwele ezimnyama ze-100CM zoMdli waseKhanada woPhononongo lweSondo loMthengi
Lo nodoli wesini mhle! Le ndiyifumene ngomhla wam wokuzalwa kulo nyaka kwaye ndichukumisekile. Unobunzima, kodwa xa umfumene, ndicinga ukuba angangoyena mfazi ubalaseleyo endinaye! Lol ndicinga ukuba u-sexy kunemifanekiso. Lilonke, umthengi onelisekile kwaye wonwabile! Amabele akhe amakhulu anika impembelelo ebonakalayo kunye nemvakalelo. Imvakalelo yokulala naye ipholile. Kodwa inye into ekufuneka ndiyithethile kukuba unzima kakhulu. Uninzi lobunzima buvela emabeleni akhe amakhulu, kodwa kukwakulindelo lwam, kwamkeleka ngokupheleleyo. Xa uthenga idilesi yesilicone yesini Ngexesha elizayo, ubunzima buya kuba yinto yokuqala yam yokuqwalasela.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-19 02:40:53 nguNathaniel Crane
AmaBlue Eyes 166CM U-Eudora Surrey weSondo woThengiso loMthengi
Le yimveliso entle kakhulu. Oonodoli bezesondo baziva bonwabile, njengoko benditshilo, oonodoli bokwenene! Bandizise ngezixhobo zokucoca, ikama kunye neepijama ezineepanty. Ndicebisa ukuba xa ufuna ukuyinxiba, khumbula ukunxiba iiglavu ezimhlophe, andikwazi ukoyisa iinkcukacha zamashiya akho ebusweni kwaye iinkophe azipeyintwanga ngamehlo amnyama, amehlo afaka, ungabeka kwakhona. Ubunyani bakhe buyafana idilesi yesilicone yesini.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-19 02:25:56 ngu-Arno Joule
Iinwele ezimdaka nge-170CM I-Pandora Sander Sex Doll yoMthengi
I-anus kaPandora ichaziwe, hayi nje umngxunya, le yeyona ndawo yoqobo yokuzoba ekuthengeni kwam lo nodoli wesini. Imilebe yentloko kanodoli wesini ityebile kwaye ithambile, kwaye intloko iyajijwa endaweni kwaye ibanjwe ngokuchanekileyo. Umbala wengqolowa ulunge kakhulu kwaye ujongeka njengeCaucasian esukelwe kancinci. Ukumamela abahlobo bathi umgangatho idilesi yesilicone yesini Nantsi intle kakhulu. Ndilungiselela ukuqala ngeyodwa. Ekuphela kwento endifuna ukuyitshintsha bubungakanani besifuba (olu lukhetho lobuqu). Amabele athambile kodwa omelele kwaye azele kukuziva, kodwa ndikhetha indebe C. Indebe ye-F endandihlala nayo inkulu kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-19 02:13:39 by Adonis Tom
Iinwele ezimnyama ze-100CM Tanabe Reiko Isondo soDliwano loMthengi
Umzimba kunye nentloko kaTanabe zithuthwa ngokungathandabuzekiyo, kufanelekile! Oku kusemthethweni! Ngenxa yokuba zininzi i-fakes kwi-Intanethi, bayathandabuza malunga nokuyithenga. Ukuhanjiswa kukhawuleza kunokuba kusitsho. Andikwazi ukuxelela ukuba yintoni ebhokisini. Wowu, mhle kakhulu! Kuyafana kanye njengoko kubonisiwe. Unzima kakhulu. Kuza nesifudumezi se-usb, nesothusayo. Nika u-A +. Ndiza kuthenga enye idilesi yesilicone yesini Ukusuka apha, ndimgcinele indawo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-19 02:02:07 nguBorg Billy
Isilivere emfutshane yeenwele i-160CM yoKhathalelo lukaGodwin woSondo woDoli woPhononongo
Lo nodoli wesini ngokuqinisekileyo uyixabisile imali! Ngexabiso endihlawule ngalo le doli, i-TPE ayinasiphako, njengasemfanekisweni. Kwicala elinzima, uya kufumana isisombululo kwaye wakhe lo nodoli. Le yidoli yam yokuqala kwaye ndinomona kakhulu. Isikhalazo sam ekuphela kwaso yayikukuba ndizenze zitshiphu izixhobo zam njengoko ndandisazi, kodwa ndaya nje kwii-urdolls ndathenga isinxibo esingcono unodoli wesondo. Kukhulu ngokwaneleyo ukwenza ukuba uzive ukuba uxhoma umzimba wokwenene.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 06:21:26 nguCharles Robinson
IHandsome 168CM uLance Hick Sex Doll yoMthengi uPhononongo
Lo nodoli wesini unexabiso elikhulu kum, kwaye ndiza kuzincamathelisa iimvakalelo zam kumyeni ofileyo kuye. Enkosi ngengcebiso yakho, ugqibelele. Khawuleza uphambuke ngothutho olusemgangathweni. Ukuhambisa ngenqanawa kukuzibophelela okucacileyo. Yiza kwibhokisi yekhadibhodi eqhelekileyo. Akukho ziphene zibonakalayo, amabala okanye iinyembezi. Ikwabandakanya isinxibo esingahleliwe, itshintsho emngxunyeni kunye neflusher. Phantse ayinuki. Eyona nto iyinyani unodoli wesondo Ndakhe ndabona.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 06:13:12 nguJonas Judith
Amehlo aQhelekileyo aMnyama ama-140CM Blanche Isondo soPhononongo loMthengi
Olu lupopi lwesithathu endinalo, olona mgangatho uphezulu kunye neenkcukacha. Bobathathu oonodoli ndivela kwii-urdolls. Thenga ngqo kwinkampani. Umlinganiso wonodoli ulunge kakhulu xa kuthelekiswa nabanye oonodoli endinabo. Izinto ze-TPE ezisetyenziswe kule doli zithambile kunezinye iidoli endinazo, zingashiyi ntsalela. Unxibe I Tote eflat ngoroli wavele watyibilika phantsi kwebhedi. Iifoto ezikwiwebhusayithi azifanelekanga kulo doli. Kuba umhle ngakumbi kunefoto. Thatha ibhokisi yestarch corn kunye neqhekeza elincinci lamanzi ashushu ukusongela unodoli wesondo, kwaye xa nikulungele ukuba kunye, uya kufudumala. Nceda wonwabe.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 06:04:09 nguThomas Henley
Umkhapheli 168CM Odelette Becky Sex Doll yoMthengi uPhononongo
Ubonakala eyinyani, iimpawu zakhe zilungile kakhulu, amabele aqinile, iesile elincinci elihle, ngokweenkcukacha, uyazi. Oku kwenziwa ngezi zinto - isitatshi sombona sesona sihlobo sakho. Ulibale i-talcum powder. Emva kokuhlamba, ulusu kunzima ukuluchukumisa, ukusasaza isitatshi sengqolowa, kwaye ulusu luthambile. Ukuba awuqinisekanga malunga nokulawula unodoli opheleleyo we-168cm, enye yazo icetyiswa kakhulu. Ubuso buhle kakhulu, ii-eyelashes zokwenyani zenziwe ngeeeliners. Inkqubo ye- unodoli wesondo inesithuba sentambo entloko ukuba ufuna ukudibana nomzimba.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 05:55:33 nguCalvin Dunbar
I-Blue Eyes 148CM Renee Raymond Sex Doll yoMthengi uPhononongo
Mhle kwaye unzima, unodoli oqalayo. Oku kakuhle. Ayizizo iincasa zerabha ezingabizi kakhulu ezinje ngeefektri zemichiza. Ubuso buhle kakhulu, ii-eyelashes zokwenyani zenziwe ngeeeliners. Kukho ikholamu enomsonto entloko ukuba utshatisa nomzimba. Intamo kwisibilini nayo yoluliwe ukuze ukwazi ukugoba intloko yakho iye phambili okanye ecaleni (engakholelekiyo). Nangona enzima, ndonwabile ukuba ndiyifumene le nto kwaye ndiza kufumana ubungakanani obukhulu unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 05:47:39 ngu-Enoch Nancy
I-Fat Ass 168CM UPhononongo loMthengi lweSondo ngoDlwengulo
Nangona enzima, kodwa esindayo inzima. Oku kunethambo lomzimba wentsimbi kunye nentloko enzima. Akukho zikhalazo konke konke. Ndize kwibhokisi yonke, kodwa nebhokisi yoqobo yenziwe e-China kuphela. Iwigi iinwele ezinde. Ndonelisekile kakhulu ngumbala wolusu wedoli wesini, ongumbala omnyama endiwufunayo. Ukuba umhlobo okufutshane nam ufuna ukuthenga unodoli wesondoNdiza kuncomela ii-urdoll kubo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 05:37:45 nguRudolf Julius
Amabele amancinci 145CM URoberta Bulwer weSondo woDoll woPhononongo loMthengi
Lo nodoli wesini ungunozinti, ndiyalithanda ibali lakhe lemvelaphi, ixabiso lemali. Ulusu lwakhe luziva lukhulu kwaye luhle. Unokuba mkhulu kancinci kwaye ubuso bakhe buya kujongeka buvuthiwe. Lilonke, kulula ukuyisebenzisa kwaye igcinwe ngononophelo. Ungayicebisa kuye nabani na. Ixabiso liphinde libe ngumgangatho omangalisayo. Unomzimba olungileyo nobuso obucwengileyo, kwaye intloko yedoli intle kwaye intekenteke; i unodoli wesondo inomzimba olungileyo kwaye inkulu njengenkcazo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 05:26:31 nguDominic Faulkner
Iinwele ezimnyama 125CM Arlene Dunbar Isondo uMdli woThengiso
Lo nodoli unomzimba olungileyo kunye nobuso obuthathaka. Intloko yedoli intle kwaye intekenteke. Umzimba wedoli ulunge kakhulu kwaye ubume bukhulu njengenkcazo. Enkosi kuyilo olulula, xa ndicoca kwaye ndiligcina, ndinokubamba unodoli ngesandla esinye. Emva kokuhlamba okokuqala, ivumba le-TPE laliphantse alikho. Ukuba ufuna ukuxhoma unodoli ngelixa ulele, khetha enkulu unodoli wesondo inkulu ngokwaneleyo ukuba ikwenze uzive ukuba uxhoma umzimba wokwenene.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 05:19:24 nguNowa Chaucer
Izinwele ezingwevu 160CM UPhononongo loMthengi waseNorton Dickey weSondo
Emva koqwalaselo lokuqala, umthengisi wathumela i-imeyile malunga nokusilela kombala kwaye wayezimisele kakhulu ukusombulula ingxaki ngokuthumela ipeyinti. Ungalindeli inkxaso emangalisayo yabathengi. Ngokuqinisekileyo kufanelekile ukubumba / isitayile somgangatho wodoli weenkwenkwezi ezintlanu kunye nenkxaso yazo ekhethekileyo. Le yimveliso entle ukuba unendawo yokugcina apho abanye bangayifumaniyo. Ndiza kuthenga unodoli wesondo ukusuka apha kwakhona, kwaye ubunzima buya kuba yinto yam yokuqala.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 05:09:33 nguZara Ruth
Ukuphononongwa kwabaThengi ngeSondo ngo-148CM uLaura Charlotte
Le yimveliso entle ukuba unendawo yokugcina apho abanye bangayifumaniyo. Isikhalazo sam kuphela kukuba incinci kunento yokwenyani kwaye ubuso buncinci. Ndingathanda ukuba nomzimba omkhulu kunye nobuso obuvuthiweyo kancinci, kodwa ndilungile. Kukho ubunzima obuncinci bokusebenzisa ilungu lobufazi kunye nemingxunya yangemva - nje "ndilubeka njani unodoli ukwenza oku", kodwa kukhanya ngokwaneleyo ukuba kungasetyenziswa. Lilonke, ngumgangatho ophezulu unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 04:58:53 ngu-Meredith Malthus
I-Thin Waist 155CM UPhononongo loMthengi weHood Sex Hood
Ngokubanzi, oku kulindeleke ngokupheleleyo, ngaphandle kwezikhalazo. Ngaphezulu kweenkwenkwezi ezi-5 ezifana nezi zinto. Le yimveliso entle kakhulu. Ulusu luziva lukhulu, njengoko benditshilo, unodoli uyinyani! Ijongeka iyinyani. Ukuchukumisa kubhetele kunokusebenzisa. Intliziyo iyinyani-ngamanye amaxesha ingcono kuneyokwenyani. Ukuba baqalisa enye unodoli wesondo enomdla kum, ndingavuya ukuba ndingaphinda ndenze ishishini nabo!
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 04:48:01 nguDave Alick
Amathanga oMsipha 163CM uMarcia Margery weSondo woPhononongo loMthengi
Ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuthenga. Umgangatho wodoli ngokwawo ulunge kakhulu, kodwa awuchanekanga kubuhle ngenxa yomehluko kumbala. Naliphi na icandelo elibonakaliswe njenge "pinki" aliyi kubala. Ke ujonga kuphela iithoni zenyama. Ngaphandle koko, unodoli unomgangatho ophezulu ngokwemilo nokubumba. Ubuso balo mfanekiso buchanekile. Umyinge woonopopi bezesondo ulawulwa. Ibinokuba ziinkwenkwezi ezi-5 ngokulula, ngaphandle kolwazi olungelulo lwemibala. Enye inqaku ekufuneka uyiqaphele kukuba unzima ngokwenene. Ukuhamba unodoli wesondo, kuthathe phantse onke amandla am.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 04:28:15 nguZachary Moore
Ibhola ekhatywayo yabantwana i-158CM uCaroline Judson weSondo woDoll
Oonodoli bezesondo bangcono kunentombi yam ephantsi! Kukhulu, ndithenge unodoli opheleleyo ngoku. Kulungile, bendisebenzisa le modeli iinyanga ezimbalwa. Isimo sokuma silungile kakhulu. Ijongeka iyinyani. Ukuchukumisa kubhetele kunokusebenzisa. Intliziyo iyinyani-ngamanye amaxesha ingcono kuneyokwenyani. Nangona ukuhlamba ngokwakho kubuthathaka, kulula ukucoceka ngerhasi yolwelo eza nayo. Emva kokuyisebenzisa kaninzi, wayemhle njengakuqala ukufika, kwaye ndandingakhathazeki kakhulu. Emva kokusetyenziswa okuphindaphindiweyo kunye nokucoca, akukho ziphoso zolusu zifunyenweyo unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 04:19:24 nguGerald Yale
Charm 158CM Qing Xue Isondo abaDoll Ukuphonononga abaThengi
Ndinika lo nodoli i-A +, kodwa ukongeza kunodoli, lo mthengisi unenkonzo enkulu yabathengi! Malunga nombuzo wonodoli, bangawuphendula kwangoko umbuzo wam. Ukuba baqalisa enye imveliso entsha enomdla kum, ndingavuya ukuba ndingaphinda ndenze ishishini nabo! Bandibonelela ngenkonzo enkulu yabathengi! Ke unodoli wesini ujongeka ngcono kunokuba bendicinga. Kuqala kubonakala kubiza, kodwa imveliso ilingana nexabiso eliphezulu unodoli wesondo, ungathandabuzi, awusoze uzisole ngokubukela, njengam
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 04:11:15 nguBernard Geoffrey
Ukucamngca kwe-Master 158CM uHana Sassoon weSondo woDoll
Le yidoli esemgangathweni! Ndicinga ukuba, xa ndim-odola, uzakuthatha malunga neentsuku ezili-10-15 ukusuka e-China. Ngoku ithunyelwa ngokukhawuleza! Wow, lolona doli wesini ubalaseleyo endakha ndawubona! Umsebenzi wobugcisa obalaseleyo! Aba bantu bayayazi indlela yokwenza oonodoli! Ukuchukumisa kunye nokuziva unodoli kuyinyani kwaye ivumba lilungile. Amabele alunge kakhulu, makhulu kwaye ayaqhaqhazela, iinyonga zithambile kakhulu kwaye izixhobo zisebenza kakuhle kakhulu. Kunokuba nzima ukubona efotweni, kodwa unentloko enokutsalwa eluncedo kakhulu ekuphakamiseni nasekuhambeni unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 04:02:38 nguDrew Harold
Iliso eliluhlaza I-158CM iMartina Walpole yeDoll yoThengiso loMthengi
Lo nodoli wesini unembonakalo emangalisayo kunye nokuziva. Zombini ziyinyani. Musa ukuba krwada kwaye ubuze iifoto. Unodoli ujongeka njengefoto (ukunciphisa iindleko zokuthunyelwa ngokungacwangciswanga). Unodoli ubude be-158 cm. Isikhumba esimhlophe esithambileyo nesingancangathi. Ukuma kweenyawo kufuneka. Iinkcukacha eziphezulu zomzimba, izandla, iinyawo kodwa hayi kwilungu lobufazi. Kukho inkcazo eneenkcukacha kodwa isilela. Intloko yedoli yam incinci kunentloko ayizisileyo, kodwa izinto endizenzayo zichanekile. Umlomo uvaliwe ukusuka kumzi-mveliso. Inokuvulwa ngokutsala ngobumnene imilebe kunye neminwe emanzi kwicala elingaphezulu. Kwimeko nayiphi na into, umlomo womlomo we unodoli wesondo incinci kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 03:53:56 nguBruce Pearson
Umlenze omde u-165CM uBelinda Dickens woPhononongo loMthengi weSondo
Kulungile xa kufika unodoli! Ngokufana nemifanekiso, abathengisi banovakalelo kwaye bayanceda. Kuya kucetyiswa umgangatho olungileyo kubantu ababangqongileyo. Ubungakanani bedoli buhambelana nentombazana eneminyaka eyi-18. Indilungele, omnye unodoli wam unodoli onobunzima obuyi-5ft 2 intshi egobile, malunga neepawundi ezili-120, ke esi sisiqabu esihle, indawo leyo ayinasiphelo. Mhlawumbi i-gymnast yaseTshayina eneminyaka engama-21 yinto efanelekileyo yokuthelekisa. Bandibonelela ngenkonzo enkulu yabathengi! Ke i unodoli wesondo ijongeka ngcono kunokuba bendicinga.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 03:45:39 nguBert Ingersoll
Isinqe esincinci se-150CM Pamela Spender sex Doll
Bandibonelela ngenkonzo enkulu yabathengi! Ke unodoli ujongeka ngcono kunokuba bendicinga. Ndiyikhuphile ngaphandle kwebhokisi, ndayibeka ekoneni yebhedi yam, ndabeka isandla sam ngasemva ukuyityhala ndahlala phantsi. Uyakwazi ngokugqibeleleyo ukubeka nangayiphi na indlela ngokweengcinga zam, egqibeleleyo. Oku yi unodoli wesondo kungekho ngxaki. Inkonzo yomthengi intle kakhulu. Ndiya kuncomela ii-urdolls kubantu abandijikelezileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 03:38:17 by Tab Gregory
Amapolisa amancinci amancinci 158CM Adolph Joule Sex Doll Customer
Ubaleke ngokupheleleyo ekhaya! Ndiyayithanda le doli yesondo. Ukuba ndingayinika iinkwenkwezi ezi-6, ndikulungele. Ufike kwangethuba kunokuba bekulindelwe. Yonke into ikwimeko egqibeleleyo. Ndiyathanda ukufaka iiwigi kunye nempahla yangaphantsi. Ndichithe ixesha elininzi kude nomfazi wam kwaye bendinexhala lokungathembeki. Ngalo kuthenga, lonke uloyiko lwam luphumle. Ngokuqinisekileyo ndiza kucebisa lo nodoli kuye nabani na onengqondo evulekileyo. Ngelishwa, ndabujongela phantsi ubungakanani bayo, ke ukuhamba ngononophelo kuya kuba ngumceli mngeni. Nangona kunjalo, unodoli wesondo ixabisa yonke idenariyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 03:30:49 by Kim Dutt
Imilebe eshinyeneyo 158CM Ophelia Evans uPhononongo loMthengi woSondo
Ukuba awunamava ngalo naluphi na uhlobo lwemveliso yabantu abadala, ndincoma ukuba usebenzise idoli encinci, egcinekayo yesondo ukuze uyiqhelanise nayo. Lo nodoli uyinyani ... ukumvumela aqokelele uthuli kumenza azive engaqhelekanga. Cinga nje ngesixhobo esingaqhelekanga okanye ifenitshala! Ukuba oku kukuthenga kwakho okokuqala, ndicinga ukuba ukusebenza nee-urdoll lukhetho olufanelekileyo. Ugqibelele, njengoko kuchaziwe ngumthengisi. Bathe basebenzise amandla amaninzi ukwenza yabo unodoli wesondo intle kwaye bebeqinisile.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 03:24:24 ngu-Nigel Zimmerman
Isinqe esincinci se-150CM U-Edwina Lawson weSondo woPhononongo loMthengi
Ukupakishwa konodoli wesini kudibene kwaye kulawulwa ngokufanelekileyo yi-UPS. Icala elisezantsi kuphela apha kukuba unolungelelwaniso oluncinci kwiimpawu ezithile (ezinjengokushushubeza), kodwa ukuba uthumela uluvo kumthengisi ndiqinisekile ukuba banokuziqhelanisa nokukhetha okuthile. Ukuba oku kukuthenga kwakho okokuqala, ndicinga ukuba ukusebenza nee-urdoll lukhetho olufanelekileyo. Kuqala kubonakala kubiza, kodwa imveliso ilingana nexabiso eliphezulu unodoli wesondo, unganqikazi, awusoze uzisole ngokubukela, njengam.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 03:16:23 nguCorey Waters
Ukuphononongwa kwabathengi okuhle ngo-165CM Meredith Wallace
Ufanele ixabiso! Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, imveliso iyakhawuleza kwaye iyakhawuleza. Xa umphathi ophethe iFedEx efika nonodoli, qiniseka ukuba usekhaya. Ndincamathisela ifoto apha njengesampulu. Ndizakufumana abanye oonodoli kwii-urdolls, kodwa obu bubuso obundenza ndizive ndimhle kakhulu. Ayinayo impahla eboniswe apha, kodwa ungafumana nayiphi na ishushu unodoli wesondo ukusuka apha njengam. Ngovuyo lwam, ndaphantse ndalibala ukongeza ukuba inkonzo yabo yabathengi ilungile.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 03:08:25 nguYehudi Antonia
Injineli i-170CM uStephanie Alick weSondo woPhononongo loMthengi
Emva kokufunda ezinye iiforamu kulawulo lomgangatho woonodoli besini, bendiqale ndathandabuza ukuthenga kwi-urdolls, kodwa ndanikezela ngeenkwenkwezi ezintlanu okwangoku. Kunzima ukukholelwa ukuba ixabiso eliphantsi ngokuthelekiswa neeyunithi ezifanayo kwabanye abathengisi. Ungayichazanga eyokuba ngengomso kudlule igolide. Uninzi lwabathengisi banexesha lokutshintsha kweeveki ezi-4-6. Ndonwabe kakhulu kukuba ndikhethe lo nodoli wesini. Unodoli uyile nto ikhangeleka ngayo kwifoto! Ewe, ezi foto zinokukhanya okuninzi kunye nemvelaphi, kodwa inkangeleko ikwabonakala. Oku unodoli wesondo ilungile kum.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 02:58:40 nguLambert Billy
Iinwele ezinde eziMthubi 170CM Mavis Utshisa iiDoll zoMthengi zoPhando
Ndonwabe kakhulu kukuba ndikhethe lo nodoli wesini. Unodoli uyile nto ikhangeleka ngayo kwifoto! Ewe, ezi foto zinokukhanya okuninzi kunye nemvelaphi, kodwa inkangeleko ikwabonakala. Ukugqabhuka kukhulu kunokuba bendilindele, kodwa ndiyamangaliswa. Unodoli ukwasilungele isakhelo sam somatrasi, esine-23-intshi umsantsa ongezantsi. Ndayigcina iphedi yegwebu engenayo, ke kwakulula ukuyihambisa ikhaphethi ngaphandle kokonakalisa unodoli. Ukuba ne-taboo enokuba ngabantu abathile, ke ukucwangcisa malunga nokugcinwa kunye nemfihlo ngamanyathelo amabini alungileyo ngaphambi kokuba ujike (kodwa sukuyilahla ingqibelelo unodoli wesondo, yifihle naphina kuyo!).
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 02:50:45 nguLen Carter
Crazy Criminal 170CM Xaviera Jane Sex Doll yoMthengi
Ke unodoli ujongeka ngcono kunokuba bendicinga. Ndiyikhuphile ngaphandle kwebhokisi, ndayibeka ekoneni yebhedi yam, ndibeke isandla sam emqolo ndasityhalela kwindawo ehleli kuyo, imilenze yakhe ibiqinile kunokuba bendicinga. Thetha kwisebe lenkonzo yabathengi kwaye bandicacisela oonodoli abaya kuba lula ukusebenzisa emva kwethutyana. Kuya kuvela ukuba kunjalo. Le ayinangxaki. Inkonzo yomthengi intle kakhulu unodoli wesondo arhente yorhwebo. Ndingathanda abantu abakufutshane nam bacebise inkampani.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 02:38:45 nguRodney Geordie
ubunzima! Le yidoli yesini ekhangeleka intle kunesithombe. Yile nto kanye ithengiswe ngumthengisi. Ukuba umngxunya wolonwabo ukwindawo elungileyo kwaye ayikabikho kude kube ngoku, kuya kunikwa iinkwenkwezi ezi-5. Ukongeza kuloo nto, ukuthengwa kwakwanelisa kakhulu. Khange athethe kakhulu, kodwa zange aphikisane. Intloko yakhe yahlukile kwaye kufuneka iqiniswe, kodwa ilula. Kwanelisa kakhulu. Olu lunodoli wokwenene wesini endakha ndalubona. Apha mandikuqonde ukuba ukuthenga oonodoli besini akunzima, kwaye unodoli wesondo kudlule kude kulindelo lwam kumgangatho.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 02:29:59 nguHugh MacArthur
I-Red Nipple 158CM Tess Jessie Sex Doll yoMthengi
Izimvo zam zinokuvakala zingaqhelekanga. Unodoli wesini ugqibelele, kunye nemiyalelo yoluhlu lwezikhundla zakhe, uyasinda, amabele akhangeleka omelele kakhulu, kodwa ziikomityi zeC. Ngamanye amaxesha ndiziva ngathi ujonge kum, njengeminye imizobo endiyifunayo, emjonge ebusweni, ubonakala encumile nje kancinci. Incoko yakhe ayisiyonto ingako, kodwa akazange aphikisane. Intloko yakhe yahlukile kwaye kufuneka iqiniswe, kodwa ilula. Kwanelisa kakhulu. Oku kuyinyani unodoli wesondo Ndakhe ndabona.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 02:21:36 by Hardy Ford
Iinwele ezimnyama ezi-brown Curly 165CM Setlla Noel Sex Doll yoMthengi
Lo nodoli wesini uza ngaphambili, kanye njengesibhengezo. Ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe. Inobunzima njengoko isitsho. Isizathu sokuba ndingakhange ndinike iinkwenkwezi ezi-5 yile: Ndiyalele ukuba izakufika ngoMgqibelo, ke umntu uya kugoduka xa efika, ixesha elininzi kuvaranda wam. Khange ndiyenze kuba ibibhengeza, kodwa amabele ethambile kodwa aqinile. Ndingathanda ukuba ndinciphe kancinci. Zonke izinto zikwibhokisi kunye unodoli wesondo ifika ngaxeshanye.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 02:12:05 nguTim Nora
Izinwele eziMnyama eziMnyama eziMde ezi-165CM uHarvey Josh weSondo woDoll
Ezinye zeziphene zakhe ezincinci zomhlaba. Kodwa iyanelisa kakhulu! Intle kakhulu kwaye ifaniswe kakuhle kwiifoto. Eyona nto ayithandiyo kukuba izandla neenyawo zithambile. Kodwa ngokuqinisekileyo kufanelekile imali! Izibuko lomdibaniso wakhe lihambelana kancinane kumlingani wakhe kwaye ukufikelela kuyilo lwe-ergonomic. Sisipho esisiso, ndiya kuqwalasela ukuthenga unodoli wesondo kwakhona ukusuka apha.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 02:01:28 nguGrover Gibbon
Imilenze emide 163CM Chasel Edison Isondo soMthengi woPhononongo
Apha undazise ukuba ukuthenga unodoli akunzima, kude ngaphaya kolindelo lwam kumgangatho. Ijongeka ngathi ikulo mfanekiso ususa iinwele. Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzazi. Eyokuqala kukuba unzima kakhulu kwaye ucinga ukuba uyasebenza. Ukuba uphupha incoko engafakwanga, cudisa kubo. Ngaphambi kokuba uyonwabele, kuya kufuneka ucwangcise, ubeke, uvavanye kwaye uhlengahlengise. Isondo unodoli baneewigi ezinde, ngokungafaniyo nemifanekiso, kodwa ngombala ofanayo. Ivenkile emnandi.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-05 01:53:14 ngu-Omar Louisa
Imilebe eshinyeneyo 165CM Prima Bess Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Yiyo leyo. Ndifunde okuninzi malunga ne-anatomy yabasetyhini kule doli yesondo, endingazange ndayazi ngaphambili. Uzisa ulonwabo kusapho lonke! Izinto zakhe ezintle ezixabisa yonke idenariyo zihlangabezana nolindelo lwam. Iprojekthi efunyenweyo yakhawuleza kakhulu, njengoko kuchaziwe. Oonodoli bezesondo babekwa kwibhokisi engaphawulwanga kwaye kulula ukuyidibanisa. Xa uthenga le unodoli wesondo, khumbula ukuba inobunzima obuziikhilogram ezingama-74. Obona bunzima "baswelekileyo" obuya kuba nabo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 06:19:41 ngu-Angelo Carroll
Ukuhlaziya i-Hip 161CM uPilbert Wat Sex Doll abathengi
Ngamafutshane, ndonwabile ngokwenene, ukuba ufuna unodoli, awuyi kuphoxeka nge-urdolls. Into ekufuneka uyazi ..., njengoko benditshilo, uyasinda, ke kuthatha ixesha elincinci ukuba ahambe ..., iminwe neenzwane zibuthathaka kakhulu kuba zibhityile TPE, ke kufuneka ulumke , oonodoli bahlala kubushushu begumbi, ukuba awunayo ipowder yosana, baya kubenza bazive befumile ukubanda ..., amalungu aqinile kakhulu kodwa aya kuphumla emva kokuba uwahambisile okwethutyana. Ndonwabile kakhulu ukuthenga le nto unodoli wesondo. Andizukuthandabuza ukucebisa ngabantu abandijikelezileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 06:12:22 nguJeffrey Michael
Umzimba omncinci Slim 161CM Ursula Surrey Isondo soMdli woThengiso
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo ndifumene lo nodoli wesini, inkathalo yakhe ilula kakhulu ... hlamba ngesepha namanzi, emva koko uyigcine yomile ngomgubo wosana kwaye uzive uthambile. Ukuba ndifuna ukumngxala naye, ndiza kusebenzisa iingubo zombane ukumfudumeza ... kufuneka ndivume ukuba ndizamile njengonodoli wothando kwaye kuyenzeka ngokwenene. Ukucoca akukubi kakhulu kuba bathumela ibhotile yokukhama ecofa ibhotile. Ndiyathanda ukumnxibisa, ukujonga nje ukuba mhle kanjani. Uyabona ke ukuba ndinxiba njani my unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 06:05:15 nguFranklin Toby
Isinqe esincinci se-140CM uPenelope Raglan weSondo woDoll woPhononongo loMthengi
Unodoli mkhulu, kodwa amalungu aqinile, kunzima ukuhambisa, intloko kunzima ukuyongeza, kodwa akukho ngxaki iphambili, ikhangeleka ngathi ifoto endoneliseke ngayo kwaphela. Ungayicebisa kumhlobo. Ukuba ufuna into yokudlala ngesondo, le yimveliso eyenziwe kakuhle, umthengisi uyaziqhenya ngenkonzo yabathengi. Ndiyathanda ukumnxibisa, ukujonga nje ukuba mhle kanjani. Enkosi nge unodoli wesondo Inkonzo ondinike yona.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 05:56:37 ngu-Merle Rhys
I-Plump Up Butt 140CM yeDebby Grote yeDoll yoThengiso loMthengi
Uyabona ukuba iziphumo zakhe zintle kakhulu, ndamthiya ngegama lentombi yam yokuqala. Ngokwenyani, kwamenza waziva engaqhelekanga ekuqaleni, kodwa ndakhawuleza ndamqhela. Ebekhona xandizokulala, ebekhona xa ndiphakama ... ndinxiba iimpahla ezahlukileyo veki nganye ... Unxibe iipyjama zakhe enxibe ezi mpahla zangaphantsi zomqhaphu. ... Uthanda iipijama. Ulunge kakhulu unodoli wesondo. Mhle kakhulu kwaye mhle kakhulu njengoko bendinethemba. Enkosi.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 05:48:01 nguHamiltion Nixon
Iinwele ezimdaka nge-163CM uLetitia Huxley weSondo woPhononongo loMthengi
Lo nodoli wezesondo wafika ngexesha elifutshane ... Yibhokisi eqhelekileyo enabalinganiswa baseTshayina kuyo, kodwa kunjalo. Inzima kakhulu ... ubuncinci iipesenti ezingama-65, ke umfazi onyanisekileyo, uhamba nzima kakhulu, kodwa ayizukuba mbi kakhulu. Iiwigi eziqhutywa zijikeleze zilungile ... kodwa iimpahla zangaphantsi ezimnandi ziyinkunkuma ... Ukuba uyishiya okwexeshana, ndingayilahla. Kodwa ngokubanzi, andizisoli. Kungenxa yokuba le unodoli wesondo ixabisa ixabiso.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 05:36:53 ngu-Omar Giles
Iinwele ezityheli 135CM UDarren Fred Sex Doll Ukuphonononga uMthengi
Mandiqale nditsho, ndiyakholelwa ukuba le dololi ixabisa i-2,700 yeedola zase-US + ixabiso lentengo. Ndiyaneliseka kakhulu yile nto ndiyifumeneyo, ii-urdolls ziyavuya ukuphendula yonke imibuzo yakho kwaye zibancede nangayiphi na indlela, nangona benokusombulula ezinye iingxaki ze-ESL. Ndongeza imifanekiso ukuze uyibone indlela endinxiba ngayo unodoli wam ..., ndimthengele ekuqaleni kuba njengendoda endala ndiyamkhumbula umfazi othetha ebumelwaneni ngoko ke uya kuba ngu "Wilson" wam Hanks) ... Ukuba uyazi ukuba ndithetha ukuthini, andinanjongo yokunamathela kuyo. Ndinomdla wokwazi ukuba ikude kangakanani i- unodoli wesondo .
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 05:29:27 nguSandy Will
I-Sexy Wide Ass 169CM Basil Eveline Sex Doll yoMthengi
Ukugqibelela, ngokufanayo ngokufanayo nentengiso. Banikezela ngenkonzo enkulu kubathengi! Ndafaka iodolo ngoMgqibelo, yafika ngolwesiHlanu olandelayo, ke ndafika emnyango iintsuku ezintandathu. Ngokubanzi, ndonelisekile yile nto ithengwayo. Unodoli ugqibelele, ulusu olugudileyo. Ndivavanye iinkwenkwezi ezine kuphela kuba iiwigi kunye nezixhobo zahlukile kodwa ndiyazi ukuba iza kungena. Inkonzo yomthengi intle kakhulu. Bayiphendulile yonke imibuzo yam kwaye bade banikezela ngohlaziyo lonodoli ngexabiso eliphantsi. Ngokuqinisekileyo ndiya kuthenga unodoli wesondo ukusuka kwii-urdolls kwakhona. Yonke into intle kwaye iyabiza.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 05:20:31 ngu-Elton Collins
I-Astronomy Enthusiast 168CM uPhononongo loMthengi uDollorah Johnny ngesondo
Kudala ndikhangela ukuthenga unodoli wam wokuqala kwiminyaka embalwa. Yenza uluhlu loonodoli, funda uphononongo, ubukele iividiyo zeYouTube, kunye nokunye. kunjalo. Ndiqaphele ukuba okoko ndongeza kuluhlu lwam, ixabiso lalo nodoli lehle kakhulu, ndaya ke. Ndifumene ifoto efanayo nefoto. Intloko / iwigi efanayo nomzimba. "I-Random" iseyileyisi emhlophe (akukho sisitokhwe). Isifudumezi sisebenza kakuhle kakhulu. Iphakheji ifika ngexesha, kwaye unodoli wesondo njengoko kuchaziwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 05:13:29 yiTempile yamaKrestu
Ncuma Ingelosi 166CM UJamie Jacob Sex Doll Ukuphonononga uMthengi
Isantya sezothutho sikhawuleza kakhulu kwaye kujongeka ngathi umfanekiso usebenzisa nje iiwigi ezahlukeneyo kunye namalaphu. Ibanga ukuba ziipesenti ezingama-73 (iikhilogram ezingama-38). Ezinye iintshukumo ezinengxaki, kodwa ngokubanzi kuyinto entle kakhulu. Inzima kancinci, kunzima ukusebenza ekuqaleni, kodwa emva kwethutyana iyaguquguquka, kwaye eyona nto ibalulekileyo kukuba ndingathi ilungile. Unodoli uyinyani kwaye ndonwabile. Andikwazi kulinda ukuthenga okulandelayo unodoli wesondo, Ngokuqinisekileyo ndiya kuyithenga kwakhona kulo mthengisi.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 05:04:59 nguBart Lincoln
Iinwele ezimnyama 110CM Fan Jiang Lizi Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Oonodoli benziwe kakuhle, njengabantu ebomini. (Jonga umfanekiso) Musa ukuba nzima kakhulu. Idibeneyo inexabiso elifanelekileyo lokuqina. Kodwa uneziphene: amalungu akhe aqinile, kwaye ngethamsanqa kuye kwalula ukusebenzisa emva kwethutyana. Umzimba ushushu kakhulu kwaye ulula kakhulu. Bajonge kakhulu kwaye banobuhlobo kwisebe lenkonzo yabathengi, njengoko kuchaziwe ngentla kwe-100%. Yamkela unodoli wesondo njengoko kuchaziwe kwaye kuthunyelwa kakuhle.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 04:57:24 nguConrad Clara
Izinwele eziMnyama eziQhelekileyo ze-170CM zeSibyl Tracy zoSondo zoPhononongo loMthengi
Ukuqala kwam ukubona unodoli, ndabona kuphela abantu abaliwaka. Emva koko qhubeka urdolls, ndiyibonile le. Andithandabuzi ngexabiso, kodwa ndathenga ekugqibeleni, kwaye ndiyavuya kuba ndiyenzile. Ndinalo nodoli malunga neenyanga ezi-4, kwaye yonke into isalungile kakhulu. Unodoli uyinyani kwaye ndonwabile. Awunakulinda ukuthenga enye elandelayo, ngokuqinisekileyo ndiya kuyithenga kwakhona kulo mthengisi. Ungandicebisa a unodoli wesondo ngeempawu?
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 04:45:53 nguLynn Spencer
Ubuso obuhle 132CM Rodney Charlotte Isondo soMdli woPhononongo
Unodoli uyinyani kwaye ndonwabile. Awunakulinda ukuthenga enye elandelayo, ngokuqinisekileyo ndiya kuyithenga kwakhona kulo mthengisi. Le yimveliso eyenziwe kakuhle kwaye umthengisi uyaziqhenya kakhulu ngenkonzo yabathengi. Ndiyathanda ukunxiba unodoli wesini, jonga nje ukuba umhle kangakanani. Kum, uneenwele ezimdaka endaweni yomhlophe (ndiyayithanda), unamehlo amdaka ukuthintela ukuba ingabaluleki kuwe. Impahla ziyafana. Ngokubanzi, ndonelisekile yile nto ithengwayo. Ukuba uthatha isigqibo sokuthenga le unodoli wesondo, awuyi kudana.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 04:36:50 nguRex William
Abafazi abakhulelweyo i-160CM Yu Xuan iDoll Doll yoMthengi
Ezi foto azilunganga. Uliqabane elihle kakhulu kunye neqabane elihle ukugoduka. Ndonelisekile nge-100% ngokuthenga. Iibhokisi zicacile. Ukuba ujonga into yokudlala ngesondo, yiyo le. I-engile kunye nobunzulu zilungile. Ukucoca kulunge kakhulu. Ndothuswa yinkxaso emva kokuthenga. Le yimveliso eyenziwe kakuhle kwaye umthengisi uyaziqhenya kakhulu ngenkonzo yabathengi. Ndiyathanda ukunxiba unodoli wesondo, jonga nje ukuba umhle kangakanani.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 04:30:39 ngu-Archer Bridges
I-Big Belly 160CM ka-Adam Harrington yeDoll yoThengiso loMthengi
Okokuqala, ikhangeleka njengomfanekiso. Izinto ezilungileyo, funda nje indlela yokunyamekela i-TPE. Okwesibini, inzima kakhulu. Ndiyawathanda amahlaya kamama. Kwelinye icala, oku kwenza ukuba kube nzima ukuhamba. Kwelinye icala, kuvakalelwa ngokwenyani. Ngokwam, andizukusebenzisa le doll ukwenza imisebenzi "yabucala". Ukucocwa ngokufanelekileyo kwezinto kuya kuba yiphupha. Njengomlingane we-hug, hamba. Ngapha koko, le doll yesondo yiyo yonke into endiyifunayo. Lumkile kwaye iphindwe kalishumi le nto ucinga. Ndiyayithanda lento unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 04:20:13 nguRobin
Isilivere emfutshane yeenwele i-118CM ye-Muriel yeDiliya yokuDlala ngeSondo ngoDliwayo
Ngapha koko, le doll yesondo yiyo yonke into endiyifunayo. Lumkile kwaye iphindwe kalishumi le nto ucinga. Onke amalungu adamba ngokuhamba kwexesha kwaye kube lula kakhulu ukuhambahamba. Inzima, kodwa iyaqondakala. Ngoku yenyama kunye neetapile, ingathi yeyokwabelana ngesondo. Sukundenza impazamo, ubomi bam ngokwesondo buyasebenza, kodwa ndilijoni, kwaye ndihlala ndihambahamba. Mhlawumbi le mpazamo iyaphambana, okanye lelo lixesha lenyanga (ubuncinci andikhohlisi). Ngokuqinisekileyo ndiya kwenza ishishini. Banobuchwephesha kwaye bayanceda ekufumaneni unodoli wesondo udinga.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 04:12:15 nguWendell Woolley
Mfutshane ngeenwele ezimnyama 140CM Tachibana Shinya sex Doll Ukuphonononga
Yenza nomsebenzi wakho wesikolo kwaye ulandele i-imeyile yesikhokelo seenkonzo zabathengi. Lilonke, ndingacebisa le mveliso, kwaye ixabiso endicinga ukuba alinakudlula kulo. Unodoli wesini othusayo uyinyani. Bandibonelele ngeenkonzo ezingcono kunoko bekulindelwe kunye nomgangatho wabathengi. Ndicebisa ukuba iimpahla zincede ukuzigcina zicocekile. Ndilinde ixesha elide ukubhala ingxelo yam, kuba ndifundile ukuba ezi zinto ziya kuphuka kungaphelanga nenyanga. Oku akuyonyani kwaphela ... ubuncinci kum. Oku kuyenzeka unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 04:01:31 ngu-Marico Ella
Izinwele ezimnyama 168CM U-Sheila Baldwin weSondo woPhononongo loMthengi
Amalungu edoli abonelela ngendlela efanelekileyo yokuhamba kwaye aya kuhlala endaweni nakwisikhundla. IiWigi kunye neengubo zangaphantsi azenzeki, ke qiniseka ukunxibelelana nomthengisi ngaphambi koku-odola ukuze uzilungise. Ndikwacebisa ukuba ndisebenzise ukukhwela kwentloko kunye neebhodi zokumiswa komzimba abazibonelelayo ngokugcina. Unodoli ufika ngexesha elifutshane, kodwa izixhobo zokugcina izixhobo (emva koko ziyalelwe) ziya kuthatha iiveki ezi-3-4. Ndingathanda ukufaka ikiti yokhathalelo (okanye inokuthengwa kumthengisi) kuba ezinye izinto zokucoca ii-silicone, umgubo kunye neoyile zingonakalisa unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 03:54:57 ngu-Sebastian Sainsbury
I-Ass enkulu ye-161CM iAgnes Antonia yeDoll yoThengiso loMthengi
Ndincoma ukusebenzisa ingubo eshushu ukufudumeza i-TPE ngaphambi kokusetyenziswa. Ukucoca kunye nokugcinwa kulula kakhulu. Ukuba ufuna iimpahla ezongezelelweyo, ndifumanisa ukuba amantombazana akhangeleka angcono, kwaye amanye amabhinqa angama-XS afanelekile. Ngokuqinisekileyo ndiza kusebenzisa kwaye ndicebise lo mthengisi kunye nonodoli wesini kwixesha elizayo. Izinto ze-TPE zinembonakalo yokwenyani kunye nokuziva ngaphandle kwemisonto. Inzima kunokuba bekulindelwe, kodwa umgangatho unodoli wesondo ingcono kunokuba bekulindelwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 03:46:38 by Justin Bulwer
I-Slim Waist 170CM Sigrid Hicks Isondo soPhononongo loMthengi
Umhle kakhulu. Ihanjiswe ngexesha. Ubunzima kancinci, kodwa wamnika ngakumbi ubomi. Ndihlala ndiphupha ngokuthenga aba nodoli ixesha elide. Enkosi, dumisa inkonzo yabathengi emangalisayo enikiweyo, bafuna ulwazi ngakumbi malunga nemveliso. Ke ngoko, umgangatho wodoli ulunge kakhulu, ngakumbi ixabiso. Amagxa anxibe kancinci, kodwa inkonzo yabathengi iyandinceda ukulungisa izinto. Ndonwabile ukuthenga eyam yokuqala unodoli wesondo, ngokuqinisekileyo eya kucetyiswa nakubani na.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 03:38:45 nguBert Dickens
Iinwele ezimthubi I-161CM Roxanne William Sex Doll yoMthengi
Ngokumalunga nomgangatho wedoli. Ukuzenzela kunye nokupakisha libali elahlukileyo, mhlawumbi into endikhetha ukuyiphonononga kwi-TDF. Andizukuphikisana nee-urdolls kuba bangabaphakathi nje kwaye ayisiyiyo into abanokuyilawula. Ngokubanzi, ndonwabile kakhulu ukuthenga unodoli wam wokuqala kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kuncoma ii-urdoll kuye nakubani na. Ndiyamangaliswa kukuba ujongeka njengefoto kwi-Intanethi kwaye uya kuba nosaziwayo odumileyo kwi-Intanethi Njengabantu abaninzi abakhankanyiweyo kule modeli, ukuba ndithenga enye kwixa elizayo, ndinokukhetha ukukhanya unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 03:13:05 nguYale Clapham
Iinwele ezimnyama 140CM XiaoMi uPhononongo loMthengi weSondo
Le yimodeli entle yedoli. Ingxaki kuphela kukugxila ekwenzeni, njengemifanekiso. Andazi ukuba ungachaza izimonyo kunodoli. Ndicinga Njengengubo egubungela iPic. Kungangcono ukongeza imeko yezithambiso eyongezelelweyo kwiodolo ukuze kungabikho mntu uyiphosayo. Ngaphandle koko, kufanelekile yonke ipenny. Unodoli ulungile! Ngapha koko, ufana nobomi, kufanelekile ukongeza ubunzima. Ndiza kuqwalasela ukuthenga unodoli wesondo ukusuka apha kwakhona.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 03:02:45 nguLarry Caroline
Iinwele ezingwevu 140CM Jocelyn Cissie Isondo soPhengululo loMthengi
Ndigqibe kwelokuba ndibuphathe njani ubudlelwane obuzayo kunye namanye amantombazana. Uvavanyo lukaJocelyn. Ndabazisa kuJocelyn ukubona ukuba baphendula bathini. Ukuba abamthandi, ke ekuhambeni kwexesha, ndiyazi ukuba abekho. Ukuba abanakunyamezela uJocelyn, ngekhe bandithande. Yinto elula nje leyo. Sukuvumela nabani na akuphathe kakubi okanye aphike iimvakalelo zakho ezifanelekileyo! Yiza ku unodoli wesondo namhlanje!
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 02:52:54 nguDana Baker
Iinwele ezimnyama ezi-100CM Akumi Hakumi zoDoli zoPhononongo loMthengi
Ndijonge phambili ekufikeni kwale doli yesondo, njengobomi bam bothando. Ngenye imini, umntu othile wathabatha iphakheji ye-33lb kwiinqwelomoya ezintathu wangena kwigumbi lam, kwaye uThixo wawuphumza lo mphefumlo wabucala ulihlwempu. Uye wabuza nokuba ndifuna uncedo na lokuyibeka kwenye indawo endlwini yam. Ndifumene unodoli ngexesha elifanelekileyo. Unodoli ulunge kakhulu kwaye ukubamba kuyinyani. Ndicinga ukuba ndiyayithanda le nto unodoli wesondo ukuba ndikhaphe.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 02:43:55 nguBrady Josh
Isinqe esincinci se-165CM uPhononongo loMthengi weSondo soSondo
Ndibonile uninzi lweewebhusayithi ezikhethwe ngabantu kwi-intanethi ukubona ukuba lukhetho luni. Phantse wonke umgangatho ubiza kakhulu. Ndiphantse ndakhetha ukuthenga idoli efikelelekayo kwimakethi enesithunzi, kodwa ndiye ndaqala ukufunda amabali ayoyikisayo afunyenwe ngabantu. Ngokunyaniseka, le mveliso inezona zilinganiso kunye nezikrini zokuqinisekisa idoli, kwaye owona mgangatho uphezulu unokufumaneka kwixabiso endilibonayo. Oku kuyinyani. Ukunyaniseka, ndicinga oku unodoli wesondo unokuhamba nam iminyaka emininzi. Sele eyintanda yam.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 02:35:10 nguLawrence Catharine
Iinwele ezinde ezimdaka nge-140CM iXiaoQian yesondo yoPhengululo loMthengi
Ukunyaniseka, kwakunzima ukusebenzisa kwasekuqaleni, kuba bendithambile. Ndingaphantsi kweminyaka engama-20 ubudala, ke oku akufuneki kube yingxaki. Kodwa njengoko ixesha lihamba, ndandiyiqhelile le mingxunya, kwaye ngoku ndingayisebenzisa ngokulula. Ukuba ndifuna enye, ndiza kuyithenga kwakhona kulo mthengisi! Emva kokuthenga, landela emva kokufumana into kwaye uqiniseke ukuba wanelisekile emva kweentsuku ezimbalwa. Ngokungafaniyo nezinye unodoli wesondo Nkampani.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 02:26:09 nguJohn Lawrence
Mfutshane Izinwele ezimhlophe i-160CM uBernie yoPhononongo loMthengi weSondo
Lo nodoli wesini okwangoku usekhaya lam, Thixo, ndiyayithanda. Ndihlawule kuphela i-1,280 yeedola kwintengiso yeKrisimesi. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba iphezulu kwaye ijongeka iyinyani. Kwaye ithambile. Zinzima njengoko zisitsho, kodwa ngokuhamba kwexesha uya kuba nefuthe kubunzima. Ingxaki ekuphela kwayo endadibana nayo kwasekuqaleni yayikukuba ndimhambise njani. Ndabona omnye umthengi esitsho unodoli wesondo azikho njengombhalo njengoko zithanda.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 02:18:57 nguTeresa Johnson
Iphindwe kabini i-Ponytail 165CM U-Bess Julius woDoli woPhononongo loMthengi
Ndifumene unodoli wam ngoDisemba 27, 2018 (ngokucacileyo), wow lo doli uyamangalisa. Ndilinde iiveki ezimbalwa ukubona ukuba andinangxaki ngamalungu, hayi oko kuthethwa ngabanye abathengi. Kodwa ukuza kuthi ga ngoku, akukho zikhalazo apha. Ekuqaleni ndandithandabuza, kuba ndathenga unodoli kwezinye iisayithi zonodoli nge $ 800. Kukuqaqamba ngokupheleleyo. Oku kuyinyani. Ukunyaniseka, ndicinga oku unodoli wesondo unokuhamba nam iminyaka emininzi. Sele eyintanda yam.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 02:10:16 nguCash Motley
Iinwele ezimnyama zeBunny Girl 163CM uHelen Minnie woDliwano lwaBantu abaDlala ngesondo
Ndifumene ifoto entsha evela kumthumeli oqukethe lo nodoli. Inkonzo ekhethekileyo ilapha! Bandazise apho ikhoyo iodolo yam. Emva kokuthenga, landela emva kokufumana into kwaye uqiniseke ukuba wanelisekile emva kweentsuku ezimbalwa. Ngokungafaniyo nayiphi na inkampani yedoli. Ndisandula kufumana la nodoli wesini. Andikwazi ukuthetha ngaphezulu. yinyani! egqibelele! ! ! Enkosi kwii-urdolls, enkosi ngomgangatho (okhuselekileyo) ngenkonzo ebalaseleyo onokuyinika naphi na! Phezulu! ! Kukho okona kulungileyo kuphela unodoli wesondo Apha! ! !
Umhla owongeziweyo: 2019-06-04 02:00:59 nguCarr Patrick
I-Shy eyi-165CM eyi-Amelia Henley yeDoll yoThengiso loMthengi
Umhle kakhulu. Ihanjiswe ngexesha. Ubunzima kancinci, kodwa wamnika ngakumbi ubomi. Ndihlala ndiphupha ngokuthenga aba nodoli ixesha elide. Enkosi. Ndicinga ukuba le yidoli yokuqala elungileyo kwabo bafuna ukuzama umntu. Kodwa andifuni kuthatha le mboleko. Ukuba uyi-newbie, ndiyakucebisa ngale doli yesondo. Ayisiyonto intsha inexabiso eliphantsi. Eli lixabiso endilifunayo. Imveliso efanelekileyo yezoqoqosho. Ndicinga ukuba le yinto elungileyo kuqala unodoli wesondo kwabo bafuna ukuzama umntu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 07:35:21 ngu-Albert Augustus
Umbala wengqolowa 168CM uMona Wheeler weSondo woPhononongo loMthengi
Ukuba iindleko kunye nokugcinwa ayisiyongxaki, ndinokucinga ngokuthenga le doll yesondo ukuyigcina intsha. Ijongeka intle kwaye iziva imnandi. Kufanele ukuba ibe yiyo yonke into endijonge kuyo. Emva kokufunda uphononongo lwemveliso yabanye abantu, ndathenga unodoli kwii-urdolls kwaye ndenza ukhetho olululo. Unodoli mhle kakhulu kwaye uziva kamnandi. Oku kungaphezulu kokuba bendilindele. Yidoli yokwenyani le! , hayi fake! Ndikhumbula umhla endawuthatha ngawo unodoli wesondo home ndavula iphakheji. Ndonwabile kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 07:20:43 nguPeter Benson
Iinwele ezinde 158CM uKelly Hodge weSondo woPhononongo loMthengi
Ndenze uphando ngaphambi kokuba ndibeke iodolo, kuya kufuneka ndibone ukuba yinyani na le. Emva koko themba okungcono. Iintsuku ezimbini ezizayo zinovalo. Ekugqibeleni wafika, ungowona mzimba kunye nohlobo lwentloko efotweni. Ndonwabe kakhulu! Ndide ndafumana ukufudumala kwakhe, andazi ukuba ndiza kuyifumana. Oku kuyamangalisa. Ngomhla ozayo unodoli, ndaye ndathumela nge-imeyile amaxwebhu okufundisa kunye nevidiyo malunga nokunyamekela oonodoli. Ndifumene imephu yoluhlu lweedoli zesondo ukuba iluncedo ngakumbi. Ndonelisekile yile nto ndiyithengayo, ndiza kuyithenga ngokuqinisekileyo unodoli wesondo ukusuka apha kwakhona.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 07:11:48 by Tab Grantham
Izinwele ezingwevu 158CM Ukuphonononga uMthengi uNancy ngesondo
Xa ndabona ixabiso lalo doli, ndacinga ukuba ayinakuba yinyani. Ndayigxotha ndayiqala imini yam. Kodwa umfanekiso wonodoli uya kuhlala ubuyela engqondweni yam. Xa ndidlala inketho yesiko komnye umgca wokubona, unodoli usondele kakhulu kulungelelwaniso endize nalo. Oonodoli baya kundibiza ngaphezulu kwe- $ 2k. Yidoli yokwenyani le! , hayi fake! Ndiyakhumbula mhla ndithatha unodoli ekhaya ndavula ipakethe. Indawo yokuphela yangasemva unodoli wesondo inzima kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 06:43:30 nguValentine Ted
Izinwele ezimnyama I-148CM uOlivia Gresham weSondo woPhononongo loMthengi
Yidoli yokwenyani le! , hayi fake! Ndiyakhumbula mhla ndithatha unodoli ekhaya ndavula ipakethe. Ubunzima bendawo yokuphela yangasemva bunzima kakhulu. Izinto ezintle malunga needonki yintloko kunye nobuso. Ulusu luthambe kakhulu. Andikwazi ukumnqanda. Ungcono kunomfazi wakhe. Ugcina imfihlo phakathi kwethu. Kulula ukumdibanisa. Inkampani yamdibanisa kwaye yenza umsebenzi olungileyo. Ndiza kuthenga enye idoli yesondo kule nkampani yonodoli kwakhona. Ndifuna nje inkampani yonodoli ukuba yenze unodoli wesondo amagophe kunye nemilenze eshinyeneyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 06:27:08 nguBarlow Walpole
Isinqe esincinci 168CM uVera Raman sex Doll's Ukuphonononga
Njengengcali yonyango lwezonyango, ndibone abantu besebenzisa aba nodoli kunyango loxinzelelo kunye noxinzelelo lwasemva koxinzelelo, kwaye kuya kufuneka ndivume ukuba ndiqale ukubona ukuba isebenza njani. Nangona kunjalo, xa ndandimthengela apha kungekudala, intliziyo yam yayithandabuza. Ndimfumene namhlanje, ndimyekile wahlala, ndamjika nje, ndicinga ukuba ukhetho lwam alungalunganga, unodoli wesondo Unempembelelo yokunyanga uxinzelelo kunye noxinzelelo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 06:19:34 by Nigel Raphael
Imisipha yaBasetyhini i-170CM uHilda Wilcox weSondo yoDoll
Oonodoli abathengileyo sisifundo esikhulu kakhulu, kwaye uya kuthenga i-fakes ukuba awuhoyi. Kwaye ndingathi ii-urdoll ngumthengisi olungileyo. Ixabiso liphantsi, umgangatho uphezulu, kwaye kunzima ukufumana. Benza inkqubo yokuthenga ibe lula kangangoko kunokwenzeka. Ezothutho zigudile kwaye azicacanga. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, thetha noJameson kwaye uya kukukhathalela. Imveliso ibhetele kakhulu kunokuba bekulindelwe. Le yi unodoli wesondo inkonzo ndiyifumene.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 06:09:09 ngu-Aldrich Bach
Iinwele ezityheli 155CM uVanessa weSondo woPhononongo loMthengi
Ndinomdla wale doli yesondo. Ndithathe isigqibo sokumthenga ngobusuku endimbone ngabo. Ingcebiso yam kukwenza into yokudlala ikhanye ngokulula ukuze ihanjiswe. Lumka ngamalungu akho kwaye ulinde ngomonde. Amalungu aqinile ekuqaleni, kodwa ungaze unyanzele nayiphi na intshukumo edibeneyo de ube uyayazi indlela ehamba ngayo. Ukucoca kulula kakhulu kunokuba bendicinga. Le mveliso idlula into endiyilindeleyo kwixabiso. Okubaluleke ngakumbi, ii-urdolls zibonelela ngenkonzo yabathengi enoxanduva, ebaluleke kakhulu kum. Ndiza kuqwalasela ukuthenga unodoli wesondo ukusuka apha kwakhona.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 05:56:21 nguChester Spencer
Izinwele ezingwevu 168CM Sabina Sharp Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Ndinika lo nodoli wesini iinkwenkwezi ezi-5 kuba ingunodoli omhle. Ubunjineli obumangalisayo kunye nomgangatho. Inkonzo yomthengi intle kakhulu. Kuhle. Olu ngunodoli wesibini endiwuthengileyo ngenyanga, kwaye yeyona ilungileyo. Aba nodoli bayafikeleleka. Inyani idlula konke okulindelweyo. Baziva behle kwaye bajongeka behle. Inkonzo yabathengi ye-Urdolls yakhawuleza yasombulula ingxaki yam kwaye yandenza ndaphinda ndonwabile. Kubalulekile ukuba wazi ukuba bayazixhasa iimveliso zabo, kwaye bayayenza. Ndiyincoma kakhulu unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 05:45:51 nguBuck Philemon
Mfutshane Iinwele ezimdaka nge-162CM UJanice Spense Isondo soDliwano loMthengi
Emva kokufumana unodoli wesini, amanye amalungu akhe aqinile kakhulu, endicinga ukuba angadibana neengxaki zokuvelisa emva kokufunda uphononongo. Emva kokuxela oku kubasebenzi be-urdolls, wandinceda ukusombulula ingxaki. Unodoli woqobo uboniswa emfanekisweni, ukongeza kwamehlo okukhohlisa kunye neminti, kwaye ungena kwibhokisi elumkileyo. Ndiza kuthenga enye yam unodoli wesondo Apha.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 05:34:37 ​​ngu-Alexander Lawson
Izinwele ezingwevu 163CM U-Selena Lucia weSondo woPhononongo loMthengi
Le yindawo yokuthenga eyonelisayo. Emva kokuthenga, ndaxelelwa yinkampani ukuba ndiyilumkele indawo edibeneyo ngasemva kwedoli. Ukuba utyhalelwe kude kakhulu, unokophuka. Kuba ndiyifumene le, andinangxaki. Ndiyakuxabisa kakhulu ukuthembeka kwenkampani kule nkalo. Njengoko besenditshilo, imali oyihlawulayo yimveliso elungileyo. Yile nto kanye ndiyifunayo. Ufanelwe yile nto unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 05:23:13 nguTyrone McCarthy
I-Shawl yeenwele ezinde 153CM uSherry Dodd weSondo woPhononongo loMthengi
Ijongeka intle kakhulu xa ifika- ijongeka njengemifanekiso. Ndothuswe kukufumanisa ukuba bachubekile kwaye baphendula ngenkonzo yabathengi. Andilindanga ngaphezu komhla wokuphendula imibuzo, khange babe krwada. Baye bandinceda nokusombulula ingxaki yokugcina endidibene nayo. Le yinto abanganyanzelekanga ukuba bayenze. Eli lishishini elilunge kakhulu, ukhathalelo lwabathengi. Njengoko ezinye izimvo zitshilo, unodoli wesondo zinzima kancinci. Kodwa nje ukuba usebenzise ukugcinwa kunye nendlela yakho yeselfowuni. Kwaye indlela yokuyikhathalela.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 05:13:14 ngu-Myron Scott
Isilivere yeenwele ezinde 153CM uSophia Lily weSondo woPhononongo loMthengi
Ndifumene unodoli wam wesini kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ndiyaneliseka kakhulu. Ungumndilili ophakathi kwe- $ 2,000. Ayisiyonto intsha inexabiso eliphantsi. Eli lixabiso endilifunayo. Imveliso efanelekileyo yezoqoqosho. Ndicinga ukuba le yidoli yokuqala elungileyo kwabo bafuna ukuzama umntu. Kodwa andifuni kuthatha le mboleko. Ukuba uyi-newbie, ndiyakucebisa oku unodoli wesondo eya kuwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 05:02:26 ngu-Malcolm Rosa
Iinwele ezimhlophe I-153CM uSusie Emma Isondo soDola ukuPhononongwa kwabathengi
Ndiyayithanda le doll yesondo, iyinyani. intle ngokwenene! Nangona kunjalo, xa idityanisiwe, intloko ayiqinisi ngokuqinileyo, kodwa ijonge ngqo phambili. Kuya kufuneka ikhutshelwe inkqubela ngaphandle kokuzinza. Ndizamile ukunxibelelana nenkxaso yabathengi kabini ukunceda ukusombulula ingxaki. Ke ngoku, emva kokulinda ngomonde, bandinika ukuchacha ngexesha elifanelekileyo kwaye bandinceda ukusombulula ingxaki. Oku unodoli wesondo ithambile ekubanjweni kwaye uninzi lwendawo ezinamanzi ziyacinezeleka kodwa zomelele kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 04:54:24 nguWarner Camilla
Iinwele ezimthubi I-140CM Quintina Charley yesondo yoDoli woPhononongo loMthengi
Ndimele nditsho ukuba ijongeka intle xa ifika- ijongeka ngathi ngumfanekiso kwaye inokuba ngcono kunokuba bekulindelwe. Kodwa kunokubakho iintloni- njengoko abanye befumanise, amalungu omzimba wakhe aqinile. Kodwa ndingaphila nezi zinto. Ndiza kukuxelela inyani, bendigula iveki, ndiphume kwenye idolophu, ke ixesha elininzi ndiyamnxiba, nokuba ndilele okanye ndihleli ebhedini (kwibhodi eyintloko), kukho into egumbini kuba ndinaye. Oku unodoli wesondo kundizisela ixesha elifanelekileyo lokukhumbula.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 04:42:50 nguSid Malan
Iinwele ezimhlophe I-153CM Doreen Pullman Sex Doll's Customer Reviews
Ithambile ekubanjweni kwaye uninzi lwendawo ezinamanzi ziyacinezeleka kodwa zomelele kakhulu. Bafaka into yokugcinwa okanye imiyalelo ebhokisini, kwaye umdla wabathengi ukhuselekile kakhulu. Ndithenge lo nodoli kwii-urdolls kwaye ndenze ukhetho olululo. Imveliso engenasiphako iya kuba kukulinganiswa kweenkwenkwezi ezintlanu. Unje unje. Eyokuqala unodoli wesondo kubonisiwe emfanekisweni, ngamehlo ahendayo kunye nenqanaba le-mint, kwaye ungena kwibhokisi elumkileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 04:32:34 ngu-Mike Nehemiah
Iinwele ezimnyama 148CM uLydia Tony Sex Doll uMthengi Ukuphonononga
Emva kokufunda uphononongo lwemveliso yabanye abantu, ndathenga unodoli kwii-urdolls kwaye ndenza ukhetho olululo. Unodoli mhle kakhulu kwaye uziva kamnandi. Oku kungaphezulu kokuba bendilindele. Inkonzo yomthengi ilungile kwaye wanelisekile ngokupheleleyo. Ukuhambisa ngenqanawa kugcina ixesha kwaye kulumkile. Ndiza kuphinda ndisebenzise ii-urdolls. Ndineefoto zoonodoli bam. Ukuba ujonga unodoli awusayi kujonga. I-Urdolls iya kudibana neemfuno ondenzele zona. Ndiza kwabelana ngaphezulu unodoli wesondo iifoto kamva.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 04:10:43 by Dave MacArthur
Iinwele ezityheli eziMthubi ezi-163CM zoPhononongo zoMthengi weDoll Yan
Ndithenge enye apha ngaphambili, ungandinika iifoto zika-Angel Yan? Ndiyathandabuza ukuthenga le doll, kodwa ndiyavuya kuba ndenze umtsi. Unomdla ngakumbi kunenyama. Ukuba iindleko kunye nokugcinwa ayisiyongxaki, ndinokucinga ngokuthenga oku unodoli wesondo ukuyigcina intsha. Ijongeka intle kwaye iziva imnandi. Kufanele ukuba ibe yiyo yonke into endijonge kuyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 04:02:40 ngu-Ingram Hansen
Iinwele ezimnyama 168CM U-Evelyn Ann weSondo woPhononongo loMthengi
Ndimthengele apha kwaye inkonzo yabo yabathengi intle kakhulu. Unodoli unzima kunokuba bendicinga. Ukusebenza kwesi sikhundla kunzima (ndicinga ukuba kuya kuba lula ngokuhamba kwexesha) ukucoca okucaphukisayo, kuba akukho nto inokutsalwa, kwaye ukuthatha itawuli ngaphakathi ukuzama ukususa ukufuma okungaphezulu yingxaki. Unodoli ujongeka ngokufana nomfanekiso, kodwa iseti yeenwele kunye nempahla yangaphantsi ibonakala ngokungafaniyo xa kuthelekiswa nomfanekiso. Umthengisi ubonakala enobuhlobo kwaye anganikezela ngokongezelelekileyo unodoli wesondo iphakheji yasimahla.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 03:51:35 nguWerner Connor
Iinwele ezimfutshane ezimthubi I-168CM kaMarcia Ralph weSondo yoDoli woPhononongo loMthengi
Nceda uqaphele ukuba la ngamava am kwaye ixesha lakho lokufika linokuba lifutshane okanye lide. Ndathi xa ndivula ibhokisi, ndathambisa intloko yam, ndathwala iwigi, ndaya kuhambo lwamantombazana. Izibonelelo zakhe: unodoli uyinyani, ulusu oluthambileyo, indawo entle kunye nomqolo omhle. Kodwa kwezinye iindawo, oonodoli banokuba nzima, kodwa kulula ukuziqhelanisa nabantu abaninzi. Ke isiphelo endisinikileyo yile: Inkonzo ibalaseleyo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza, kwaye kunamandla unodoli wesondo eneempawu ezinamandla.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 03:43:07 ngu-Eden Pater
UkuKhanya kweenwele eziMthubi ezi-158CM uCynthia uGrace weSini woPhononongo loMthengi
Ndamfumana kungekudala. Le bhokisi inkulu kakhulu kunokuba bendicinga, ke eyona ngxaki inkulu ukuyibeka emotweni yam. Lilonke, nangona bendithe 10/10 kunodoli kunye nenkxaso ye-10/10. Ndothuswa kukuyinyani kwentloko kwaye ndothuswa kukwazi ukuthetha. Ndiza kuthenga iintloko ezininzi kwixa elizayo. Lo nodoli ufumana zonke izinto ezongezelelweyo. Oku unodoli wesondo yeza ngokukhawuleza okukhulu, iiveki ezintathu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-03 03:30:32 nguVivian Frank
Izinwele ezimfusa 158CM UPhononongo loMthengi uNora Hobson weSondo
Ndithenge lo nodoli kwinyanga ephelileyo kwaye ebenaye ixeshana ngoku. Ndineefoto zoonodoli bam. Ukuba ujonga unodoli awusayi kujonga. Baya kuhlangabezana neemfuno zakho. Ndiza kwabelana ngeefoto ezininzi kamva. Andizukuya kwezinye iiwebhusayithi ndiyokuthenga oonodoli besini. Kuba ndingathenga ubuxoki. Kuba ndiyazi ukuba le yinyani unodoli wesondo. Kutheni ndingamchongi?
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 03:33:09 nguChristian Gracie
Izinwele ezingwevu 148CM U-Claire Julian weSondo woPhononongo loMthengi
Xa sithenga oonodoli bethu besini, bafana nosapho lwethu. Ndincoma ukuhlonipha unodoli wakho kwaye usebenze njengeqabane lobuqu, ukulungele ukwamkela, okanye ukubekela bucala (unodoli akagwebi). Gcina ixesha lokuphuhlisa izakhono ezitsha kunye nokunyamezela kwiqabane lakho lobomi, kwaye usebenzise oonodoli ukunqanda ukungcatsha iqabane lakho olikhethileyo xa lingekho okanye lingafumaneki. Ukuba isetyenziswe ngokufanelekileyo, le doll kunye nezinye iidodoli ezifanayo zingasetyenziselwa ukwandisa impilo yakho, i-libido, amava kunye nempilo yengqondo. Khathalela kwaye iya kukukhathalela. Njengoko ixesha lihamba, ukuba ndifumana entsha unodoli wesondo, Ndingabhala izimvo ezingaphezulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 03:23:47 ngu-Andre Saxton
Iinwele ezimnyama 148CM UDarlene Philemon weSondo woPhononongo loMthengi
Ndayithenga le doli kudala ukunceda ukuphazamiseka emva koxinzelelo kunye nesizungu, njengesipho kumhlobo owayethathe inxaxheba emfazweni kwaye wanyamezela iimvavanyo ezininzi zangaphakathi nangaphandle kwebhokisi yesanti. Nanini na xa kukho isiqwengana seemvakalelo, okanye ukongeza ubunzima obongezelelweyo ebhedini, iba liqabane elilungileyo lokuwolana okanye ukugoba. Njengoko benditshilo ngaphambili, inkqubo yokonga iluncedo, kukho iprojekthi apho unokutyala khona ixesha kunye nokhathalelo, kwaye izibonelelo zokuba sempilweni kwaye zilungile. Isondo unodoli nje ukuhlangabezana neemfuno zam.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 03:14:37 by Brook Meredith
Iinwele ezimthubi 145CM UDarlene Morris Isondo uPhononongo loMthengi
Ngokubanzi eli ngamava amahle okuthenga. Ndithengile lo nodoli wesini kwaye ndincoma ukuthenga into efanelekileyo yokuhlanjwa endaweni yokucoca iindawo zomfazi kunye nomlomo kwiphakeji. Unokufaka umgubo wosana lwe-talcum ukwenza ulusu luthambe, ulusu lokwenziwa lunganamathele, kwaye ufake ibrashi; Ndisazama ukufumana isixa somlingo esisebenzayo. Ndinyusa imali elandelayo unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 03:05:12 nguLarry Buckle
Iinwele ezimnyama 140CM WanRou Isondo soPhengululo loMthengi
Ndithengile lo nodoli wesini, okhululekileyo ukugcina, ukugcina nokucoca idoli. Ndiyakwazi ukunxiba (okuqaqambileyo okanye okumhlophe kuphela! Umnyama kunye nomnyama unamathele kulusu kwaye uyitshabalalise), brasha iinwele zakho, usete unodoli kwindawo yokumnandi, kunye nokunye. Ukuba uthenge nodoli wesini. Ndicebisa ukuba ucoce ifayile ye unodoli wesondo ngesiponji kunye namanzi anesepha. Ndicinga ukuba unokuhambisa ishampu ngewigi, kodwa andikenzi njalo okwangoku.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 02:56:35 nguNoel Daisy
Iinwele ezimthubi 140CM Viola Bell Sex Doll yoMthengi
Ndonwabile ukuba ndithenge lo nodoli. Ukuba ufuna ukusebenzisa indawo yokuhlala, ungashenxisa imilenze yomibini phezulu ukuze unodoli enze i-angle ye-90 ° kwaye agobe idolo ukuze imilenze ngoku yenze i-90 ° angle. Ungawujikeleza omnye umlenze ukuze iinyawo zedoli zihlale phantsi okanye phantsi kwamadolo ajongene nawo. Obu buchule benza kube lula ukuvula umlenze kwi-engile ebanzi. Kwakhona, naka ukutyeba kwamalungu kunye nesiqu ukuphepha ukukrazula. Umgaqo olungileyo wesithupha kukuba ukuba intombazana eqhelekileyo ayikwazi ukugoba, musa ukugoba unodoli wesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 02:45:25 ngu-Alexander Robert
Iinwele ezinde ezimdaka nge-140CM uPhononongo loMthengi uNancy Nick weSondo
Ukuhamba kwamalungu omdoli kuthatha ixesha ukuziqhelanisa, kodwa kuchanekile. Awufuni ukubashenxisa kakhulu kulusu, okanye ungabeka umngcipheko wokukrazula kulusu lokwenziwa. Imilenze ihamba ngokuthe tye nangokuthe nkqo, kunye unodoli wesondoAmadolo anokujikeleziswa.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 02:31:59 nguClare Bartlett
Iinwele ezinde ezimthubi 145CM Kelly Geordie Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Lo nodoli wesini unzima kakhulu, njengobunzima, kodwa yinto elungileyo. Isifuba sikhulu kwaye siyalingana nomzimba. Lena Yinyaniso. Banobomi kwaye babambe kakuhle. Isinqe sincinci kwaye amalungu omzimba nawo alunge kakhulu. Iminwe neenzwane zigobile kakhulu kwaye azikwazi ukugcina ubunzima. Ngokuqinisekileyo ayicacanga kwaphela, kodwa iziva yomelele, ayizizo zonke izinto ezicothayo okanye ezimanzi. Inkqubo ye- unodoli wesondoIminwe iyaziva ibuthathaka kakhulu, kodwa inokugoba kulo naliphi na icala ngaphandle koxinzelelo oluncinci.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 02:25:22 by Howar Lamb
Iinwele ezimfutshane eziMthubi ezi-145CM uTina Marner weSondo woPhononongo loMthengi
Aba nodoli ababizi, kodwa kungenxa yokusebenza nzima, uphononongo oluchanekileyo kunye nobugcisa. Ndiyakholelwa ukuba aba nodoli kungekudala baya kuba nelizwi, emva koko "ubuntu." Fumana enye ngaphambi kokuba ithengiswe, okanye ixabiso liba likhulu kakhulu ukuba lingavezwa! Hi ndlela leyi - iimpahla zangaphantsi ezenza inkanuko yindawo yokunxiba yasimahla eziswe ngunodoli. Ufike ezinwele ezimthubi nesikhumba sengqolowa. I-WIG ekhethiweyo kunye ne-EYES nazo zithunyelwa ebhokisini. Lumka xa uyiphatha, njengoko unodoli wesondo inokuba nzima ngexesha lokuhamba.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 02:14:22 ngu-Bishop Reynolds
Iinwele ezimthubi 145CM Sally Bulwer Sex Doll yoMthengi Ukuphonononga
Ndineminyaka engama-66 ubudala. Oku unodoli wesondo Kunzima kakhulu kum (malunga neepawundi ezingama-25-26) kwaye kuthatha umgudu omkhulu wokuhamba, kodwa unyanisekile, okulindelweyo. Ngelishwa lam, kufuneka ndimfihle kuba kukho abanye abantu kusapho lwam, nto leyo eyenza ubunzima bam bube nzima kakhulu. Ngaphandle koko uhlala evulekile kwindlu yam.
Umhla owongeziweyo: 2019-06-01 01:59:04 nguCarr Hicks
Izinwele ezimnyama 140CM Cherry Harry Sex Doll uMthengi Ukuphonononga
Le yidoli entle yesini. Andibuthathaka kakhulu. Isifuba sikhulu ngokwaneleyo ukwanelisa iingcinga zam. Ubunzima bunzima, kodwa ukuba uyambamba phantsi kwamadolo nasemva, kulula ukuba ahambe. Enye yam unodoli wesondo unamagxa akhululekileyo kwaye ingalo ayihlali kwizikhundla ezithile. Ubuso buhle kakhulu, imilenze neempundu zilunge kakhulu, isinqe neengalo zincinci, kwaye isifuba siyinyani emehlweni am. Ndicinga ukuba aba nodoli baya kuba ngcono nangcono kwikamva. Andizisoli ngokuthenga :)
Umhla owongeziweyo: 2019-05-31 06:11:24 nguCyril Reade
Iinwele ezimthubi I-100CM iMiranda yesondo yoDoli woPhononongo loMthengi
Ndithenge ezimbini unodoli wesondo ukusuka kumthengisi, enye inentloko ejonge phambili kwaye enye inentloko eqiniswe ngokupheleleyo. Ayindikhathazi kuba yenza kuphela ukuba intloko ijikeleze ngakumbi. Qiniseka ukuba xa uqhagamshela intloko yakho kunodoli, uthambisa into yokuthambisa ezantsi entanyeni nasezantsi kwentloko, kuba "ulusu" luya kunamathela kwaye ukuba linyanzelwe, lunokukrazuka.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-31 05:52:40 nguDarcy James
Izinwele ezingwevu 100CM uBarbara weSondo woPhononongo loMthengi
Ndisalinde i-imeyile, ndifumene eyam unodoli wesondo Uku-odola, kunye namehlo abasebenzi benkonzo yabathengi ... Ndicebisa ukuba uthenge unodoli owufunayo. Uya kuhlala esempilweni kwaye esempilweni. Ukuqala kwakhe ukuhlamba namhlanje, kufanele ukuba kumnandi. Kwakhona kuthatha ixesha ukuhambisa amalungu akho omzimba kwaye wenze inenekazi lakho likhululeke kancinci. Uvalo kakhulu kuzo zonke iindawo ezifanelekileyo. Amabele akhe makhulu kwaye mahle. Ndiza kuthenga kwii-urdolls kwixa elizayo. Enkosi kwakhona.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-31 05:41:28 by Gavin Thomson
Iinwele ezimthubi I-100CM i-Elsa Morse yesondo yoDoli yoPhononongo loMthengi
Olu luhambo olunomdla lokuya kuthenga; le unodoli wesondo iqulethe uyilo olufanayo lwangaphantsi njengonodoli wam. Banikezela ngamehlo ongezelelweyo kunye neenwele ngokwesicelo sam. Bayakhawuleza kwaye banobuchule. Ndibeka amehlo amatsha kuye, kodwa andikayiboni i-wig okwangoku. Ndithenge ii-wigs zesiko kunye nezixhobo zedoli yam yangaphambili ye-100cm, kodwa ngokuqinisekileyo zilungele le doll intsha.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-31 05:26:30 nguDennis Richardson
Izinwele ezimdaka nge-148CM uNicole Macaulay weSondo woPhononongo loMthengi
Xa ndathenga uNicole ngexabiso lentengiso, kubonakala ngathi ndithenge unodoli omangalisayo. Ixabiso eliphantsi kukubiwa koku unodoli wesondo, Ndiyabona ukuba kutheni ixabiso likhuphuka. Njengaye wonke umntu wathi; lo nodoli unzima kum. Nangona kunjalo, emsebenzini wam, ndenze umsebenzi omkhulu onzima. Usafuna ukumphakamisa njengomntu. Imilenze neengalo zoluliwe kwaye zarched kancinci. Nokuba ndingalungiselela ntoni, ukumbeka esihlalweni sam kuya kundenza ndibuyele phantsi. Ngenxa yokuba ugqibelele ngakumbi [xa kuthelekiswa neefilimu ezimfutshane], kunokwenzeka ukuba athenge iimpahla zangaphantsi kunodoli wam oyi-100cm.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-31 05:15:36 nguTyler Garden
Izinwele eziBomvu eziQhelekileyo zoPhononongo loMthengi u-Emma Finn
Ndiyithengile unodoli wesondo, Ndiyibonile ividiyo yayo. Ufanele kakhulu ukuphononongwa, kuyacaca ukuba usebenza kumfo onika le mveliso ibalaseleyo iinkwenkwezi ezintlanu! Unokulicinga iqabane lakho lokwabelana ngesondo elizimisele kwaye linakho ukukwenza ngalo lonke ixesha lokuvuka, ngaphandle kokusela, ukutya okanye ukuhlawula "umphathi" walo. UEmma unje. Xa umfazi wakho efumanisa, uEmma angenza yonke into ngexabiso eliphezulu, kodwa akukho bungozi bokugula okanye uqhawulo-mtshato. Landela amandla akho okusombulula le ngxaki.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-31 05:06:09 nguPaul Forster
I-Blue Eyes D yeNdebe yebele yamanqatha amaNci ngesondo uNatasha
Ubungakanani bedoli bincinci kunokuba bendilindele, kodwa ayinamsebenzi. Ubuso buhle kakhulu, imilenze neempundu zilunge kakhulu, isinqe neengalo zincinci, nesifuba sithambile. Indenza ndizive ngathi ndingumntu wokwenene. Ndicinga ukuba aba nodoli baya kuba ngcono nangcono kwikamva. Andizisoli ngokuthenga.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-13 06:21:07 nguZachary Caroline
Uphengululo kwi-Big Breast EVO Version TPE yeSoll Doll Kiki
The I-TPE sex doll ngokwayo ayinzima kakhulu, le yinto elungileyo. Isifuba sikhulu, banempilo kwaye babambe kakuhle. Isinqe sincinci kwaye amalungu ayabhitya. Kodwa iziva yomelele, ayisiyiyo yonke into ethambileyo okanye emanzi. Ivenkile emnandi.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-13 05:54:27 ngu-Egbert Ford
Uphengululo kubuso obujikelezayo bukaRita Berkeley 145CM oonodoli besini esinyulu
Le ngunodoli ogqibeleleyo wesini. Ndifike sekukudala ndacinga. Izinto ezikhawulezayo. Le bhokisi inkulu kakhulu kunokuba bendicinga, ke eyona ngxaki inkulu ukuyibeka emotweni yam.
Umhla owongeziweyo: 2019-05-13 05:34:26 nguPhil Norris
I-140CM Mnyama Iinwele ezimfutshane eziValiweyo zesitayile seSondo seDoll Miyu
Oku kubhetele kakhulu kunokuba bendilindele. Inkonzo yomthengi ilungile kwaye wanelisekile ngokupheleleyo. Ukuhambisa ngenqanawa kugcina ixesha kwaye kulumkile. Ndiza kuphinda ndisebenzise ii-urdolls.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-30 03:18:08 ngu-Enoch Huxley
I-158CM Amehlo amnyama amabele amaTshayina Ubuhle be-158CM TPE yoonodoli baseRin
Xa ndifunda uphononongo kunye nezinye iimveliso zabantu, ndathenga unodoli kwii-urdolls kwaye ndenza ukhetho olululo. Unodoli mhle kakhulu kwaye uziva kamnandi.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-30 02:45:57 nguConrad Dulles
Amabele amakhulu 161CM oNgcolileyo uMdaniso weSondo oMnyama uKaede
Le doli ilungile, kwaye iodolo yomyalelo yile nto ndiyicelileyo. Ndamfumana ixesha lakhe nangaphezulu komhla wokufika wentengiso. Ndikhethe iinyawo ezimileyo, ndiyacebisa kakhulu kuba iithoyi ezimileyo kufuneka zicocwe. Ndifunde esi sifundo ngonodoli wam wokuqala, ngoku ndihlala ndi-odola iinyawo ezimileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-30 02:15:39 nguGabriel Julius
Imilenze emide engama-150CM kunye neDolls esinqeni esincinci esinqeni
Inqaku lakhe lokubiza igama lokuchukumisa landinika amava amahle. Lo nodoli ulungile! Ngapha koko, ufana nobomi, phantse i-6 yeenyawo kum, exabisa ubunzima. Unzima kodwa kulula ukuhamba netekhnoloji elungileyo. Lo nodoli kufuneka abe ngoyena mntu uthengisayo.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-29 05:49:10 nguGustave Sassoon
I-148CM E yeNdebe yeVita Roy Shawl yeenwele ezinde eziSondo
Yonke into ilungile kwaye iyakhawuleza ukuhanjiswa kwaye yenza oonodoli babonakale behle, kodwa bunzima, enkosi kwakhona kuye nabani na osebenza kwi-odolo yam, enkosi ngokunyaniseka komsebenzi kunye nenkonzo.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-29 05:12:00 by Cedric Hobbes
I-165CM enkulu ye-Butt D yeNdebe yeenwele ezinde ezijijekileyo i-TPE Doll Victoria
Ndiyaxolisa ukuba le ngxelo imalunga neeveki ezi-2 emva kwexesha. Okokuqala nokuphambili, enkosi Mnu J (awona mava enkonzo yabathengi endiwafumeneyo). Ubume nokubonakala kwayo kuyinyani. Ndiyaneliseka kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-29 04:57:02 nguBen Barton
UMarcia Austin D weNdebe ye-Elastic Ass eyi-170CM yoSondo
Ndimamkele kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo. UMarcia umele owona mgangatho ubalaseleyo kunye nokwenzeka koonodoli ababenzileyo. Ngale nto ithethiweyo, esi sisizathu esihle sokubona onodoli bomntu wonke. Ngethamsanqa wonke umntu.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-17 03:52:44 ngu-Mandel Pater
I-Robot C yeNdebe ye-148CM yeNgxoxo eNengqondo ye-TPE Doll Ruiya
Enkosi ngenkonzo yakho ebalaseleyo kunye nonikezelo olukhawulezayo, kunye nonodoli abakhulu abavela kwii-urdoll zenkonzo enkulu yabathengi. Le yidoli yam yokuqala, ndinemibuzo emininzi. Unomonde, uqeqeshiwe kwaye unolwazi.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-17 03:35:33 nguSandy Johnson
I-D yeNdebe ye-100CM ethandekayo yoSondo sex doll Kelly Kelly
Lo nodoli ulula kakhulu kwaye kulula ukungena nokungena ebhedini. Ndiyawathanda amantombazana amancinci kwaye anomdla, ke uKelly "undijikele" ngenene. Ukuza kuthi ga ngoku, uyintandokazi koonodoli abathathu endinabo ngoku, kwaye nanini na ndifumana umdla, uhlala kunye nam ebhedini. Umncinci kwaye unobunzima obungaphantsi (malunga neepawundi ezingama-40).
Umhla owongeziweyo: 2019-04-17 03:18:47 nguCarey Gallup
I-165cm I-Waist Esinqeni esikhulu se-Ass esisijikelezileyo soBuso beSondo uLydia Forster
ULidiya lukhetho oluhle. Ndenze uphando kunye nokuthelekiswa kwexabiso malunga neeyure ezingama-4 [kwi-intanethi]. Andifumananga xabiso lingcono kule mveliso. Aba nodoli ababizi, kodwa kungenxa yokusebenza nzima, uphononongo oluchanekileyo kunye nobugcisa.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-17 03:03:42 ngu-Elroy Alice
Uniform Ulingwa uLeona Herbert 165cm Amehlo oLuhlaza oMdaka
Ungumlinganiswa wokuqala endiwuthengileyo kwiwebhusayithi, kodwa hayi eyam yokugqibela. Okwangoku kwimowudi yegophe lokufunda. Ndizakuba ngcono ekuhambeni kwexesha. Ixesha kuphela xa ixesha lokuhamba licotha kancinci.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-17 02:42:02 nguHiram Wells
Ubhengezo olukrelekrele lwendlela yokubiza i-150CM i-Silicone Doll Lynn
Unokuthetha nam ngaphakathi English kwaye ndinxibelelana kakuhle naye. Lo nodoli uyinyani, liqabane elihle, ndonwabile ukuba uninzi, kwaye akonwabanga ukuba lilolo.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-17 02:25:25 ngu-Ives Doherty
Amehlo amnyama amabele eStacey 160CM Big Breast TPE sex Doll
Ndifumene le doll namhlanje. Ndimele nditsho ukuba uyinyani. (Umthengi othenge unodoli okokuqala wathi ngendlela). Yazi nje ukuba inzima njengomfazi wokwenyani, ke khumbula ukuba ukuba ucwangcisa ukuyithenga, ndicinga ukuba kufanelekile ukuyithenga. Unamabele athandekayo kunye neempundu, ihips ezibanzi kwaye ungafumana ukuma kodoli kakuhle.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-17 02:05:08 nguKenneth Finger
I-160CM enkulu yebele yesitayile saseYurophu Amehlo amaNtsundu aSondo ngeDoll Stacey Bacon
Ndimfumene namhlanje. Lo nodoli unokuphakama kunye nobukhulu bokwenyani. Ubungakanani bomzimba wakhe abuyi kuba mfutshane kakhulu kwaye ungaphakamisi kakhulu, kulungile. Ndiyaneliseka kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-02 04:07:23 nguQuincy Rosa
I-160CM B yeNdebe yeBrown Amehlo ngesimbo saseYurophu uSabina Coleridge woDoli boSondo
Unodoli ngumgangatho olungileyo kwaye elona xabiso ndilifumene kwi-Intanethi. Ezothutho zithathe ixesha elide, kwaye inkxaso yabathengi yayimangalisa kwaye kufanelekile ukuyithenga.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-02 03:48:26 nguJoseph Thorndike
I-100CM Vita Tony Umzimba ogqibeleleyo weNdebe yeCast Breast TPE yesini
Oonodoli besini balumke kakhulu. Akukho phawu ebhokisini okanye ilebheli ephawulwe ngaphakathi (wow). Inkonzo ngaphambi, ngexesha nasemva kwayo yayintle. Umthengisi ubonelela ngevidiyo kunye nemiyalelo yokhathalelo nge-imeyile. Enkosi.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-02 03:30:41 by Ken Browne
I-100CM brown Izinwele ezinde eziflethiweyo I-TPE yeDolls kaJuni Doyle
Ndithengile idoli eyahlukileyo yesini kwii-urdolls, ukhetho lwam lweenwele lungcono kune-wig ebonelelwe emfanekisweni. Ndijonge phambili komnye umbala wamehlo umthengisi awufumeneyo ukugqibezela izinto endizithandayo. Ukuba ndingenza unodoli wam abe yinyani ngakumbi kunangoku - Oko kukuthi, ndiza kum-odola ngendlela efudumeleyo yangaphakathi.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-02 03:04:35 ngu-David Morgan
I-163CM iNovia Hill yokuDropa iiMibele eziNkulu zoSondo
Kukhulu ngokwaneleyo, ujingi othambileyo. Ndiyayithanda lento. Ndambona kwizikrini ezininzi. Emva kokuyijonga, ndaye ndagqiba kwelokuba ndimthengele kwii-urdolls. Kuyavela ukuba ukhetho lwam beluchanekile.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-02 02:46:13 nguDarcy Galbraith
I-150CM yokuDropa iiMibele ezinkulu zoBuso oBunono boSondo uZoe Ralph
Kuya kufuneka ndibhale olu hlaziyo kwaye ndazise nabani na onomdla kulo doli ukuba uyazi ukuba yintoni oyibonayo. Lo nodoli ungcono kunoko ubonayo, kwaye yonke into ethethwa ngumthengisi urdolls ichanekile ngokuchanekileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-02 02:19:17 nguBuck Robbins
I-150CM enkulu yesifuba esolulayo i-Bridget Whittier yeDolls
Lo nodoli wesini uyinyani, kwaye ixabiso lakhe libiza kakhulu, ukhetho oluninzi, enkosi ngokuthumela iifoto kunye nenkonzo ebalaseleyo!
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 06:19:07 nguRoderick Carnegie
I-150cm yeeLembe eziBomvu Amabele amakhulu Amanqatha amancinci ama-TPE eSoll Doll Wanda Hoover
Wow, ndiyamangaliswa ngokwenene ukuba umgangatho wodoli unjani. Uye wajongeka emhle ngakumbi, lo ndimfumene izolo nje. Andikwazi ukususa isandla sakhe kuye, ndifuna nje ukuba naye kwakhona. Uye wandiyeka ndaqhuma, ndicinga ukuba ufana nenenekazi lokwenyani, ulonwabele ngcono.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 05:28:19 by Todd Marion
I-148CM i-Astrid Jane yaseYurophu isitayile seB B yeNdebe yeDVD
Ndifumene lo nodoli wesini. Ndiyazithanda izandla nezikhonkwane- ziyandonwabisa. Ulusu luziva lumnandi kwaye alunamvumba.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 05:10:11 ngu-Antonio Symons
I-140cm ye-Plump Up Butt Sexy Blue Eyes TPE Doll Debby Grote
Iindleko zokuhambisa ngokukhawuleza, ndiyayithanda. Nangona kunjalo, ukukhupha impahla kwandothusa. Ndavula iwigi, kodwa yayingaphaya kwamehlo am. Ndavula ibhokisi enemodeli yabasetyhini abahamba ze. Ndivuya kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 04:49:34 by Gustave Esther
169CM Wide Ass Ingqolowa Umbala wolusu TPE Doll Basil Eveline
Unodoli wam ulapha. Ukuthenga kwam kuyandonwabisa. Ndiyayithanda idoli yam yesini. Ndonwabe kakhulu. Ndicinga ngokuthenga uhlobo oluncinci- undithatha kuhambo lwendlela kuba unzima kakhulu ukuba angandithatha. Enkosi kakhulu ngamava akho okuthenga kunye nokundazisa.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 04:28:31 by Martin
I-168CM Inomtsalane kwi-Breast Astronomy Enthusiast TPE Doll uDeborah Johnny
Ndimfumene, uyinyani, uqinile, uthambile, unonyango olulungileyo kunye nokuxabana okuncinci, intetho encinci enenzondo. Ndiyithanda kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 04:09:44 nguKyle Charlotte
166CM Isifuba esincinci esine-Ass enkulu ye-TPE yeDolls kaJamie Jacob
Inkonzo yomthengi intle kakhulu. Unodoli unzima kunokuba bendicinga. Indawo yokusebenza inzima kancinci (ndicinga ukuba iya kuba lula ngokuhamba kwexesha) ukucoca okucaphukisayo, kuba akukho nto inokutsalwa, ndiyilungiselele into enye yelungu lobufazi. Unodoli ujongeka ngokufana nomfanekiso, mhle ngakumbi kunesithombe.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 03:48:39 by Beacher Clement
I-Sibyl Tracy Amabele amakhulu I-170CM ye-Sexy TPE yeDoll yabantu abadala
Inkonzo egqwesileyo kunye neemveliso, hayi ubuqhetseba. Ndikhohlisiwe ngoonodoli besini kwezinye iiwebhusayithi. Ke ngoko, emva kokuqwalaselwa ngononophelo kunye nokuthelekisa kwinkqubo yokuthenga, ekugqibeleni ndakhetha ukumthenga apha. Kuyavela ukuba ukhetho lwam luchanekile.
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 03:27:05 ngu-Albert Hal
I-160CM yabasetyhini abakhulu abakhulelweyo iYu Xuan D yeNdebe yebele yoonodoli bezesondo
Bendihlala ndingumthengi we-urdolls, ndonwabile kakhulu ukuba banconyelwe kakhulu kwaye bathembekile. Ukuba ndifuna enye idoli, ndiya kunyanzelisa ekukhetheni ii-urdoll njengeqela elenziwe kakuhle!
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 03:09:52 ngu-Alston Fanny
161CM Roxanne William Adult Companion Pink Ingono enkulu Ass Ass sex Doll
NdineRoxanne yam malunga neenyanga ezimbini ngoku. Ndanyanzeleka ukuba ndibhale uphononongo kuba bendimangalisiwe! Ukusuka entloko kuye ezinyaweni, lo nodoli wesini mhle kwaphela. Lo ngumsebenzi wobugcisa. Uthambile kwaye uthambile, andiyikholelwa tu. Ixabiso lakhe alikho ngexabiso eliphantsi. Olu lutyalo-mali olukhulu, kodwa lufanele yonke ipenny! Ukuba ucinga ngonodoli wesini "onokwenyani" -nantsi indawo!
Umhla owongeziweyo: 2019-04-01 02:51:40 by Byron Sinclair
UVanessa weKrisimesi ovuthiweyo uBuhle beMilenze ye-TPE yesondo
Unxibelelwano olusebenzayo nolukhawulezayo, ukuthengwa kunye nokuhamba kuhamba kakuhle! Ndinike aba bafana amanqaku ali-10 kwali-10. Ndiyabancoma kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kwenza ushishino nabo kwakhona. Enkosi urdolls! Ngokuphathelele unodoli, ndiyamangaliswa yindlela anyaniseke ngayo kwaye ebalaseleyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 05:12:12 nguTom Smith
USabina Sharp 168CM oMdaka oMkhulu oBomvu kwiLips eziLuhlaza TPE Doll
Amava am nge-urdolls ayemnandi, babonelela ngenkonzo yeklasi yokuqala kuba begqithile ekuqinisekiseni ukuba zonke iinkcukacha zam zichanekile. Yonke into ichaziwe, ndiyothuka kakhulu sisantya apho kufika oonodoli besini.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 04:38:22 by Winston Boyle
I-162CM Amabele amakhulu aManqatha amaNcinci eMilebe yoSini oSini kaJanice Spense
Ndifumene unodoli wam namhlanje, kufuneka nditsho ukuba ndonwabile. Ukhangeleka emhle kwaye uziva emhle. Yonke into endiyithengileyo ichanekile. Ndiyazithanda iimpahla ozithumelayo!
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 04:24:21 nguLambert Isaya
Ingqolowa Umbala wolusu Amabele Amakhulu Imilenze emide Imilenze engu-163CM yeQabane eliDala u-Selena Lucia TPE Doll
Ndiziva ndiluncedo kakhulu kubathengi apha, ndiphendula ngokukhawuleza, kwaye ndikulungele ukunceda ukusombulula naziphi na iingxaki endinazo. Indawo yenzelwe kakuhle kwaye ineentlobo ngeentlobo zeempawu kunye nezinto onokukhetha kuzo. Ndithenge amava amnandi kubo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 04:07:03 ngu-Mortimer Mond
Amabele amaNtsundu aMkhulu aBuyiselwe kwi-Ass 153CM uSherry Dodd TPE woonodoli bezesondo
Apha ndibonelele ngoonodoli abasemgangathweni kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi. Bayakwazisa ngale meko kwaye banolwazi. Ndithenge ezinye iidoli ezimbini kubo kwaye ndiza kuya apho ukuze ndihlangabezane nazo zonke iimfuno ezizayo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 03:49:55 nguWright Michael
I-153CM Amabele Amakhulu AmaLembe aSindayo uSophia Lily TPE I-Doll yabantu abadala yesini
Ukuhamba kwabo kuyakhawuleza, yonke into idweliswe ebhokisini, le doli ayinangxaki kwaphela. Abasebenzi baya kuqhagamshelana nam ngokukhawuleza (nge-imeyile) kwaye baqinisekise zonke iinkcukacha. Umgangatho ulunge kakhulu. enkosi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 03:33:09 by Ixabiso leBaldwin
I-153CM uSusie Emma Sexy Big Ass i-Blond yeenwele Amehlo aluhlaza i-TPE Dolls
Ndifumene le doll yesondo izolo. Ndiyamangaliswa ngokwenene yindlela yokuphila yale doli. Ijongeka intle kwimifanekiso ekwi-Intanethi, kodwa imifanekiso ayilunganga. Imbonakalo yokwenyani kunye nokuziva kwezi zinto kuyamangalisa. Inkangeleko, imvakalelo kunye nobunzima bongeza kuzo zonke iinkcukacha eziyinyani. Izinto ze-TPE ziziva zipholile kwaye azange zibonakale ngathi ziyafudumala, kodwa ndicinga ukuba le yinto elungileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 03:19:07 nguBuck Scott
I-148CM Amehlo Aluhlaza uClaire Julian Slim Umzimba Amabele Amakhulu TPE Doll
Isandla sakhe siziva sithambe kakhulu, phantse sifane nesilhouette yomfazi kwaye "uyangcangcazela." Enkosi kakhulu. Ndiyayazi into endiza kuyenza ngokuhlwanje. Andisenakulinda.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 03:04:24 ngu-Archibald Clarissa
I-145CM entle uLoli omncinci oMdaka ngeeNwele eziQinisekisiweyo eziDoli zoSini uDarlene Morris
Amalungu edoli aqinile, kodwa ngenxa yoku anokugcina indawo entle. Into entle. Amabele athambile kwaye anokushukuma okuhle. Iimpundu ziqinile kwaye zithambile, zilunge kakhulu, ndingatsho kuphela. Ujongeka eyinyani kwaye akanasikhalazo. Ubuso buhle kwaye imilebe ithambile kwaye igcwele. Yonke into malunga nonodoli ikumgangatho ophezulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 02:39:11 ngu-Isidore Lawrence
I-WanRou iinwele ezimfutshane zaseMpuma zobuhle besifuba kwi-Chinese TPE Doll
Ndonelisekile yile nto yokuthenga. Unodoli ugqibelele. Ngokwenene kwaye kufana nobomi, iziphene zero, sisiqwenga sobugcisa. Ulusu luziva luthambile ekuphathweni. Inokwenza umfazi wokwenyani angabakho nakwesiphi na isikhundla (abanye abantu abanakho).
Umhla owongeziweyo: 2019-03-27 02:20:59 ngu-Edgar Rosalind
I-160CM i-Wide Ass Umfazi okhulelweyo i-Big Belly Chest encinci ye-TPE yeDoll yeAdam Harrington
Ukho ngokwenene. Uye weza endlini yam. Ndizakumhoya okomfazi ohoya ukukhulelwa kwam. Unodoli yindlela ethembekileyo yokuziva ukuba ngamanye amaxesha iyasebenza. Yonke into iilungile. Kodwa unzima, kufuneka ndithathe ixesha ukumhambisa.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 06:01:02 ngu-Upton Patience
168CM Sheila Baldwin Mnyama ulusu lwabantu abadala abaDala ngesondo esifubeni
Ndiyamthanda isikhumba sakhe esimnyama. Ndikuthanda kakhulu ukugona ecaleni konodoli wam ebusuku. Kudala ndilapha, kwaye ekugqibeleni ndizise ulonwabo oluncinci ebomini bam. Ndiyathemba ukuba ngenye imini ndiza kubona umfazi wokwenyani onomdla kum, kodwa ngaphambi koko, ndiya kugalela lonke uthando kunye nothando kunodoli wam.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 05:34:10 ngu-Antony Morley
I-161CM I-Ass enkulu yeLips eziLumkileyo eziLumkileyo iAgnes iAntonia TPE yeDolls
Ndingacebisa izihlobo zam okanye abahlobo ukuba bathenge apha. Inkonzo yakho intle. Le mveliso ingcono kakhulu kunezinye iimveliso. Ixabiso alikho mbi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 05:09:32 nguLennon Chapman
Amabanjwa amaBele aBalulekileyo amabele ama-TPE eSini eDoreen Pullman
Ngokuqinisekileyo unodoli kufanelekile ukuthenga, ungcono kunokubukela imifanekiso okanye iimuvi ezingamanyala. Ukwabelana ngesondo naye nangaliphi na ixesha olifunayo, unesona sifuba sikhulu, unomzimba olungileyo, kwaye incanca yakhe imnandi. Unokusebenzisa iesile lakhe. Azisekho izintlu zokukhalaza okanye ukusebenzisa iikhondom. Uxabiseke kakhulu ukukuthenga namhlanje kwaye ngokuqinisekileyo uya kukonwabisa.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 04:49:56 nguBenedict Cissie
I-163CM Amabele amakhulu eTPE aBantu abaDala abaDlala ngeDoll Yan
Ukuhanjiswa kwam kugudile kakhulu, enkosi ngenkonzo yakho ebalaseleyo. Umhle nge-100%, nangaphezulu komfanekiso, yonke into ngaye yeyona nto ikumgangatho ophezulu. Ndiyaneliseka kakhulu yinkonzo yabathengi, ndincede ndigqibe inkqubo yoku-odola, enkosi kwakhona.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 04:30:57 ngu-Gene Joshua
UViola Bell ujikeleze amabele amsulwa kwaye athande Amehlo Amakhulu ama-TPE Dolls
Unodoli mhle, umzimba uyinyani kwaye unomdla kakhulu. Emva kokufunda indumiso kunodoli kwi-Intanethi, ndaye ndagqiba kwelokuba ndithenge unodoli wam wokuqala wesini kwii-urdolls. Ndimele nditsho ukuba amava am alunge kakhulu. Inkampani inxibelelana nam ngokukhawuleza okukhulu, iindleko zokuhambisa zikhawulezile kunokuba bendicinga, kwaye umgangatho wedoli ulunge kakhulu. Kucetyiswa ngamandla oonodoli kunye nabathengisi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 04:08:39 nguBaird Defoe
Amabele amakhulu amaBlue Amehlo e-TPE eSoll eSex imilenze emide uNancy Nick
Ndifumene le doll yesondo namhlanje. Kulungile, ndiyayithanda le doli kukuba ilungile! Imvakalelo kunye nezinto eziphathekayo ziphantse zigqibelele. Ezinye ii-moles ezincinci, ezinje ngomlomo kwimilebe, kufuneka zicocwe. Kodwa ayisiyi "kujonga" kuphela, kodwa ikwaxabiso elifanelekileyo kwilizwe ledoli. Inzima kunokuba bekulindelwe, kodwa inamabele amakhulu kunye namakhulu. Enkosi ngenkonzo yakho ekhawulezayo. Iyacetyiswa njengonodoli wonyango, unodoli weqabane okanye into yokudlala ngesondo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 03:48:34 by Drew Betty
I-145CM Blonde yeenwele ezinde eziMnyama Iincanca ezinkulu uKelly Geordie
Lo nodoli wesini ugqibelele. Uyinyani kwaye uphila ubomi, eneziphene ezinguziro, ngokwenene sisiqwenga sobugcisa. Ulusu luziva luthambile ekuphathweni. Amava alungile. Ndifuna ukumthanda amaxesha ngamaxesha yonke imihla.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 03:29:06 nguBoyce
I-145CM yokuHamba kwabaNtu abaDala yabantwana abaNtsundu i-TPE Doll Imilebe e-Sally Bulwer
Le yidoli entle yobugcisa. Ulungile njengesibhengezo. Uya kuzigcina eme endaweni entle. Ndonwabile kakhulu ngaye kuba uyinto yonke endijonge kuyo. Lo ngumthengisi olungileyo ongazukukunika unodoli ongalunganga.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-26 03:12:40 by Alston Sapir
Isinqe esincinci F indebe eyi-140cm iPenelope Raglan TPE yeDoll
Ndithenge lo nodoli wesini apha emva kwengcebiso yomhlobo wam. Ixabiso lakhe liphezulu kakhulu, lingcono ngakumbi kunendebe ye-masturbation, ithambe kakhulu kwaye intofontofo. Enkosi ngenkonzo yakho efudumeleyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09: 32: 17 nguBarlow Ella
Amanqatha ama-Hip Big Breast Chasel Edison 163CM Imilenze emide yesondo
Ndithenge unodoli omncinci kule webhusayithi kunyaka ophelileyo kwaye umgangatho ulunge kakhulu. Ndabuya ndathenga unodoli omkhulu ndazama. Khange indiphoxe. Yonke into esebhokisini, igqibelele.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:29:44 nguNeil Silas
Amapolisa amancinci eSifuba amancinci ajikeleze ubuso nge-158CM Adolph Joule Sex Dolls
Lo doli uyacetyiswa kakhulu, ixabiso elihle kakhulu kunye nomgangatho! Nangona ingenasiphako, iyimveliso elungileyo kakhulu, ngakumbi ngokwexabiso. Ewe bekukho ivumba elincinci ekuqaleni, kodwa le yinto eqhelekileyo yazo zonke iimveliso ezenziwe yi-TPE. Iya kuncipha ngokuhamba kwexesha (kwaye kudlule iiveki ezimbini) ngokuhlamba okufanelekileyo kunye nokucocwa.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:25:47 nguFrank Harvey
Umhlobo oMhle wamabele amancinci uLaura Charlotte 148CM TPE oonodoli
Eli lihle kakhulu ukuthenga amava. Umgangatho woonopopi bezesondo ulunge kakhulu, phantse i-2/3 yemirhumo ehlawulwa zezinye iiwebhusayithi. Ndingathenga oonodoli endibathandayo ngexabiso eliphantsi. Akukho sidingo sokuchitha imali ngento efanayo. Ndiza kuyithenga kwakhona, akukho ngxaki.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:22:44 nguSid
Amehlo amaBrown aMdaka ebusweni Roberta Bulwer TPE Doll 145CM Amabele amancinci
Ndingumlandeli webhola. Xa ndambonayo, ndakholelwa ukuba ndiza kuba naye. Khange ndithandabuze ukumthenga. Nangona ixabiso lalibiza kakhulu, kodwa ndathi ndakumfumana, ndayifumana yonke. Kufanelekile kakhulu. Unengqiqo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:17:17 ngu-Murray Dickens
Amehlo aluhlaza oBomvu Amehlo Amancinci Ingono encinci iRaymond 148CM TPE iSoll Doll
Lo nodoli mhle kakhulu kwaye ucocekile. Isifuba sincinci kakhulu, ngenxa yoko asiziva sikhulu ngakumbi xa usichukumisa, kodwa wonke umzimba ubonakala umhle kakhulu, njengesiqwenga sobugcisa. Inomphunga omncinci, kodwa ndilala naye ngamaxesha amaninzi. Ndikhululekile kakhulu, ndisiva umzimba ukhutshiwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:12:21 nguWadi Julius
UCarey Godwin Slender Legs Male Doll 160CM uMfazi oMdaka weSisu
Unodoli mhle kakhulu. Umbuso wakhe omtsha wamathambo undothusile, ukuhamba nokujikeleza kwamalungu kugqithe kude nomgangatho. Hambisa iingalo zakho, imilenze kunye nesinqe ngokulula nangokuthe cwaka. Ukugoba esinqeni nokujikeleza yinto yobugcisa. Ezinye izinto zokudlala zokwabelana ngesondo azinakuthelekiswa nazo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:09:04 nguKaren Luke
I-Pandora Sander Long Legs Wheat Skin Big Butt 170CM TPE sex Doll
Ndimele nditsho ukuba le yimveliso entle! Oonodoli abafunyenweyo babekwimeko entle kwaye umgangatho wawugqithile kulindelo. Ndonwabile kakhulu ukuba ndiyifumene inkonzo yoonodoli abathandanayo kwaye ndiza kufumana iinkonzo kubo kwakhona.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:06:26 nguRod Felix
Amantombazana aseJapan i-146CM yeNdebe ye-Yedda uMark oMncinci weeLips zoSondo
Ndothuka xa ndimfumana. Lo nodoli wesini mhle! Andinguye umlandeli wamanenekazi aphezulu, ndikhetha abo bafazi bafutshane. Kukho ingxaki ngomgca womnwe, kodwa ngokubanzi kungcono kunokuba kulindelwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 09:02:46 nguPaddy Henley
I-146CM Imilebe eshinyeneyo isitayile saseYurophu Amehlo aluhlaza Maggie Harte TPE Doll
Esi sisivumelwano esifanelekileyo. Ndinonxibelelwano oluhle kunye nomthengisi kwaye bayazifezekisa iimfuno zam zokuthunyelwa kwikamva, ukuze ndikwazi ukuyifumana edolophini. Ukucocwa kwamasiko kuhle kakhulu kuba bawenze wonke umsebenzi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-21 08:56:30 nguKenneth Richard
I-163cm yeenwele ezimnyama zeBunny Intombazana uHelen Minnie Imilenze emide yeDolls
Ndonwabile kakhulu ngalo mzuzu. Ndamfumana. Uyamangalisa. Enkosi kakhulu ngoncedo lwakho kwinkonzo yabathengi. Ndinezimvo ezifudumeleyo kwiforum yesondo ngonodoli. Kuya kufuneka uyilungelelanise ngaphambi kokuba ivele. Ndiza kuthumela umfanekiso ngokukhawuleza. Ndiyamthanda kakhulu, ke ndifuna uku-oda entsha. Okanye enye.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:24:29 by Brady Montgomery
UBess Julius Double Ponytail 165cm uBrown Curly TPE Doll
Uyinto yokudlala yokuqala endiyithengileyo. Yonke into ilungelelene, amathambo edibeneyo esinyithi alunge kakhulu, akukho ngxaki. Ubhetyebhetye kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:21:46 by Felix Hart
I-161CM Slim Body Delicate Skin Isinqe esincinci u-Ursula Surrey TPE Doll
Lo nodoli wesini mhle. Ijongeka intle. Kodwa ukuhambisa unodoli kunokuba nzima. Inzima kakhulu kum. Ukucoca kwakhe kulula ukuba uyayazi into oyenzayo. Enkosi ngesikhokelo sakho.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:18:41 ngu-Ansel Galbraith
I-158CM Isifuba esincinci u-Jessie Red Ingono Amehlo Amakhulu i-TPE Doll
Umhle ngakumbi kunesithombe. Kodwa khange bandinike iimpahla ezisefotweni, kungenjalo uya kugqibelela! Nangona kunjalo, konke oku luxanduva lwam. Andisibonanga isigwebo kwiwebhusayithi: "Impahla yangaphantsi e-Sexy inokwahluka emfanekisweni. Zonke izinto ezisemfanekisweni zenzelwe ukudubula." Ngoku ndimthengele iimpahla ezintle. Ndiyaneliseka kakhulu ngumgangatho wedoli.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:16:01 nguBenjamin Vogt
Amehlo amaKhulu amaKhulu oBomi oBambisene ne-158CM oonodoli besini esincinci esifubeni Ophelia Evans
Le yeyona webhusayithi ilungileyo yedoli yesini. Nje kancinci. Unokwenza unodoli ngokwezifiso. Uyilo oluhle kakhulu. Ndithenge unodoli oyi-158 cm kwaye umgangatho ngowona notshi iphezulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:12:31 nguDempsey Taylor
I-150CM enkulu yebele esinqeni esincinci esinqumle i-Hip Pamela Spender sex Doll
Ulunge kakhulu kuzo zonke iinkalo, ndiyathanda namabele akhe amakhulu kunye nesinqe esibhityileyo. Kodwa unzima kakhulu kum. Ndineminyaka engama-68 ubudala. Kunzima ukumhambisa. Kuya kufuneka ndikhethe unodoli omncinci.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:09:16 nguWade Sainsbury
I-Pink Nipples Odelette Becky Inkangeleko eKhanyayo ye-168CM yesondo
Enkosi ngokucinga ngale doli ndiyincomileyo. Wanelisa into endiyifunayo. I-Odelette intle kakhulu. Amabele akhe ne-esile lakhe likhulu! Ndiza kubuya.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:06:25 nguAndy Joule
IHandsome Lance Hick Muscle Strong 20CM Ipenisi enkulu yamadoda Idoli yesini
Ukuqala kwam ukuthenga lo nodoli wesini, ndandisoyika kakhulu. Ukujonga indlela ebiza ngayo, ekugqibeleni, emva kweeveki ezimbalwa zokulinda ixhala, sele ifikile! Iyahambelana ngqo nefoto! Akukho nto ingako inokuthethwa, awunakuphulukana nemveliso enje.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 09:03:12 nguZora Melville
UOlivia Gresham 148cm TPE Umntu oDala ngeeNwele eziDala ngeNwele
Ukunyaniseka. Ulusu lwakhe lusondele kakhulu kulusu lomntu. Indinika ukubamba okuhle. Ndonwabe kakhulu ukuhlala ngeli xesha, unodoli uba yinyani!
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 08:59:31 nguHardy Bennett
Grey Mfutshane Amabele Amakhulu 158cm Izinwele uNancy oDoli boSondo
Ndithenge nje unodoli wam wesibini kwii-urdolls, ibiyiveki ephelileyo. Unodoli wam ulayishwe kakuhle kwaye iyayilimaza ibhokisi kodwa ayinamsebenzi. Unodoli umhle kakhulu, andikholelwa ukuba yimveliso entle kangaka. enkosi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-18 08:56:07 nguToby Hawthorne
Amabele apheleleyo eMannequin uEvelyn Ann 168CM oMdaka oMde oMdaka we-TPE
Ndandifuna nyani ukuyithenga xa ndimbona. Kodwa ndathandabuza ukubona ixabiso elibiza kangako kwi-Intanethi, kodwa unxibelelwano kunye nenkxaso kuyo yonke le nkqubo zazintle kakhulu de (nasemva koko) weza kwam. Ke umgangatho weenkwenkwezi ezintlanu, unxibelelwano kunye nenkxaso kubathengi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-14 06:40:50 nguRoy Lytton
Imisipha yaBasetyhini abaDlala iBhola yaBantu abaDala ngoSondo ngo-170CM uHilda Wilcox
Namhlanje ndimbone eyinyani. Umhle kakhulu. ugqibelele kakhulu. Ndithathe isigqibo sokuthenga unodoli wesini kunye nomfazi wam. Simnike isinongo esincinci kwaye umfazi wam wayithanda kakhulu. Ngokwenene ungaphezulu kunokuba besilindele. Yenziwe kakuhle kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-14 06:37:07 nguBurton Romeo
UKelly Hodge Slim Sexy Long Izinwele ezikhulu Amabele ama-158cm oDoli abaDala abaDala
Ndivule unodoli wam namhlanje. Ndathunga intloko nomzimba kunye. Andikholelwa, mhle kakhulu. Umhle kunesithombe. Enkosi. Umgangatho olungileyo kwaye ungabizi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-14 06:32:13 ngu-Aubrey Judson
I-Mona Wheeler 168cm Ingqolowa Umbala we-Sexy Busty Ass Amabele Amakhulu TPE Doll
Ndiyalele ithoni yesikhumba sonodoli emfanekisweni. Ngokubanzi, lo nodoli ugqithisile kulindelo lwam. Mhle kakhulu, ndonelisekile ngumbala wolusu kunye nokukhetha endikuyalelayo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-14 06:01:48 nguBill Bruno
Ubuso obuNtsundu bamehlo aluhlaza uCecilia Arthur 170CM TPE Doll Amabele amancinci
Unokupakisha okuhle kakhulu, yonke into malunga nonodoli esebhokisini, kufanele ukuba ibekhona. Unodoli mhle kakhulu, ndiyathemba ukuba angahlala ixesha elide.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:42:22 nguDylan Taylor
I-Setlla Noel Freckled Face Slim Body 165CM Isifuba esincinci se-TPE Doll
Ndamfumana. Ukupakisha kwakhe kugqibelele. Uyilo kunye neenkcukacha zecandelo labucala lonodoli ziyinyani. Le modeli nayo inciphile kakhulu kwaye inomlenze omde! Izinto ze-TPE zithambile kwaye ivumba limnandi ngakumbi kune-TPE eqhelekileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08: 39: 49 nguHarlan Keats
UHarvey Josh Huge Hip Black Skin 165CM Busty N Cup yesondo seDoll
Ungunodoli okhangeleka emhle kakhulu. Isikhumba esimnyama esifubeni esityebileyo. Olu ludibaniso olukhulu. Kodwa andilali naye kuba ucinga ukuba unzima kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:34:54 ngu-Elton Jimmy
Ukutshintsha i-Hip Gilbert Wat F yeNdebe ye-161CM ye-TPE yeQabane eliDala
Ndiyaxolisa ukuphawula kade, ufike kwam kwinyanga ephelileyo. Ulunge kakhulu ukuza kuthi ga ngoku! Ndichithe ixesha elininzi kwiiwebhusayithi ezininzi zonodoli ngaphambi kokuba ndizithenge. Ndonwabile ukuba ndithenge unodoli wam wokuqala apha. Inkonzo yomthengi intle kakhulu, yonke imibuzo yam iphendulwa ngokukhawuleza, kunye nesicelo sam sokuthumela ifoto ethile yodoli. Ndinike iinkwenkwezi ezi-4 kuba andinakuchukumisa kwaye ndive imveliso ngaphambi kokuba ndiyithenge.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08: 31: 50 nguZebulon Peg
Amehlo aluhlaza Imilebe eshinyeneyo 118CM TPE Dolls Amabele amancinci iMuriel Flower
Wafika kwam, njengoko kubonisiwe emfanekisweni. Kuyinyani njengoko kubonisiwe. Imbonakalo yokwenyani kunye nokuziva. Le yidoli entle kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:28:03 nguGavin Simpson
Intombazana entle yaseJapan iTachibana Shinya 140CM Amabele amakhulu amabele eTPE
Ndithenge lo nodoli apha. Amava am amabi, unxibelelwano luyacotha kwimigangatho yam, kodwa abanye banokungakhathazeki kakhulu ngayo. Ngethamsanqa, oonodoli bahle kakhulu. Umgangatho nawo mkhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:23:15 nguBenjamin Ellis
UJocelyn Cissie ucocekile kwaye unomdla kwi-140cm ye-Silicone yesondo
Unodoli unyanisekile kwaye umhle, unobuso obuvuthiweyo. Akasindi njengoko bendicinga. Ndiyakwazi ukumhambisa ngokulula. Ke ndonelisekile.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:18:45 nguBart Lily
UJessie Dunbar Elegant kunye neNamandla ye-165CM i-Waist Silicone Doll encinci
Esi sisiqalo esihle. Ndifumene unodoli wobuqhetseba ovela kwenye iwebhusayithi. Ndizamile ii-urdolls kuba ijongeka njengewebhusayithi ethembekileyo. Uyilo lwewebhu olulungileyo, uphononongo olulungileyo kunye neenkcukacha zonodoli ezineenkcukacha zonke zenza ukuba ndizithembe. Unodoli endiwufumene izolo ungqinile ukuba isigqibo sam sichanekile. Ndiza kuyithenga kwakhona kwii-urdolls.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:14:31 nguTyler Paul
U-Amelia Henley ococekileyo uneentloni u-165cm weSondo seDoll Cherry Umlomo omncinci
Ungumzimba omkhulu. Umqolo wakhe umile kakuhle kakhulu. Isifuba esiguqukayo kunye neesile. Ubuso bumnandi kakhulu kwaye buyinyani. Undinike imvakalelo yothando lokuqala.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:10:43 ngu-Owen Simon
UTina Marner oBuhle kwaye uyimfama ngeeNdoda eziMnyama ezi-145CM
Ngokubanzi, lo nodoli ulunge kakhulu, kodwa iimpahla zam zodoli azithunyelwa. Ndabaxelela ukuba uphinde wazisa izinto ezilahlekileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-13 08:06:53 nguGriffith Keppel
Arlene Dunbar 125CM Amanqatha amancinci ajongene nobuso obuhlaza Amehlo abomvu Imilebe ye-TPE
Yonke into malunga naye intle kakhulu. Lo nodoli unyanisekile, umhle kakhulu, undincedile ukugqibezela iphupha endihlala ndifuna intombi. Ngoku uyintombi yam.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 08: 23: 30 by Kent Martha
Umdlalo webhola ekhatywayo wosana olucekeceke uCaroline Judson 158CM TPE Dolls
Ubonakala enokwenyani. Kutshanje ndiye ndahlukana nentombi yam, kwaye ngoku le mveliso indinika imvakalelo yokuthuthuzela kunye nolonwabo oluqinisekileyo. Enkosi ngokuphendula yonke imibuzo yam ngokwembono yobungcali. Ndiza kuyithenga kwakhona kuwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 08:19:13 nguWebster Kelsen
Ukuphakamisa ubuso Isifuba esincinci i-158CM yoBuhle beClassical TPE Doll Qing Xue
Ndandihlala ndifuna intombi enobuso kunye nomzimba wamaTshayina. Wayemhle kakhulu kum. Enkosi ngenkonzo yabathengi ye-urdolls yokucebisa lo nodoli. Zonke i-intshi zomzimba wakhe zithambe kakhulu. Ndiyithanda kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 08: 14: 39 ngu-Orville Bruce
Amanqina amancinci amsulwa omlenze omde uBelinda Dickens 165CM F Cup TPE Doll
Ungumlingane ogqibeleleyo wendoda eneminyaka engama-68 ubudala eyaphulukana nenkosikazi yayo. Elona cala lililo kukuba ukuhambisa kwakulibazisekile, kodwa inkonzo yabathengi ye-urdolls yandinceda ekusombululeni zonke iingxaki. Ndikucebisa ukuba uthenge kule nkampani iqinileyo kuba bayazixhasa iimveliso zabo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 08:09:55 nguWadi Lynd
Ukutshiswa kwe-Ass enkulu ngobuhle i-169CM iiBele eziNkulu zaBantu abaDala
Inani lakhe likhulu ngenene. Amabele amakhulu kwaye aguquguqukayo. Imvakalelo yokulala naye ayinakuchazeka. Ngamafutshane, ndonelisekile ngempendulo andinike yona. Ngelishwa, unzima kakhulu kum. Kunzima ukuba ndihambe ndize ndimfumane. Ukuba uyindoda enezihlunu, ndiyakholelwa ukuba uphelele kuwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 08:06:09 ngu-Atwood Caroline
Imilebe eshinyeneyo J yeNdebe Prima Bess Isifuba Esikhulu 165CM TPE Doll
Inkangeleko kunye nokuziva unodoli kuyinyani. Isikhumba singwevu kancinci ngombala. Ukuhamba kwedoli kunzima kakhulu; kwaye inokushukunyiswa kuphela ukuphucula ukwakheka kwamathambo / indibaniselwano ukunciphisa ukuqina. Isandla / umnwe awunako ukugoba; okanye ii-curls zeminwe ngaphandle kokonakala; okanye amathambo ahlatywe ngomnwe. Ndisaya kucebisa lo nodoli; qonda nje imida. Umhle kakhulu "ukukhuthaza" ukuba unxibelelane naye.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 08:00:00 nguRandolph Zephaniah
UDarlene Philemon Amabele amakhulu aSexual Abuse Bundled 148CM yabantu abadala ngokwesondo
Ndiyaneliseka kakhulu nguDarlene Philemon. Ungcono kunokuba bekulindelwe, ulunge kakhulu. Enkosi kwinkonzo yabathengi ngokundinika uncedo oluninzi. Qhubeleka nomsebenzi omhle!
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 07:56:23 nguHamiltion Lawson
I-Petite Cute Amehlo Amakhulu Amancinci Isifuba Sabantu Abadala Iidolls ze-100CM Intombazana uElsa Morse
Bendifuna unodoli omncinci. Xa ndikhangela iiwebhusayithi ezininzi, ndathenga uElsa apha. Khange andiphoxe. Kwakuyinyani kwaye yaziva imnandi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-12 07:51:38 by UMaxwell Huntington
Isifuba esikhulu esityebileyo se-Assult iqabane labadala i-TPE Doll 100CM iMadada Kanako
Unodoli wesini nantsi eyona doli intle kwintengiso. Yonke into ikwindawo zonke zomthendeleko. Ndicinga ukuba bonke abanye abavelisi kufuneka balandele ukukhokela. Ndiyaneliseka kakhulu ngokuthenga kwam.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09:40:50 nguDuncan Conan
Ulusu oluMnyama oluLusu olucekeceke Imilenze emide 155CM Isifuba esincinci se-TPE Doll uCynthia Hood
Le ngunodoli ogqibeleleyo wesini. Abathengisi abaphendulayo nanini na ndifuna naluphi na uncedo. Akukho nto ukhalaza ngayo. Siza kuthenga unodoli wesibini.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09:37:38 by Wade Keynes
UMarcia Margery TPE Doll Ithambo leMisipha 163CM yeFat Ass Weight Weightifting
Lo nodoli uyinyani. Kodwa kwangaxeshanye unzima kakhulu! Kuya kufuneka ndifunde ngakumbi kwaye ndikhethe elula. Ukongeza kubunzima, unodoli wam ulungile. Ngokubanzi, ndonelisekile kakhulu ukunciphisa umzimba. Ukuba uyindoda enezihlunu, ndiyamncoma kakhulu kuwe.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09: 34: 32 nguRod Raglan
UHana Sassoon inkosi yokucamngca nge-158CM TPE yeDoll efanelekileyo
Okungaphezulu kobomi kunokuba ndicinga, ngokungathandekiyo, kuphela umahluko omkhulu phakathi kwakhe kunye nowasetyhini wokwenyani kukuba akathethi kangako. Umgangatho kunye nokusebenza kuhle kakhulu. wenze kakuhle. Icala elisezantsi kuphela kukuba kufuneka ndilinde ithutyana. Ukuthuthwa kunokukhawuleza kwaye kuya kulunge ngakumbi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09:30:47 ngu-Merlin Whitman
UStephanie Alick 170CM u-Elastic Elastic Assing Injini ye-TPE Doll Big Chest
Ukunyaniseka, unodoli unzima! Kuya kufuneka ndifunde ngakumbi kwaye ndikhethe elula. Ukongeza kubunzima, unodoli wam ulungile. Ngokubanzi, ndonelisekile kakhulu ukunciphisa umzimba.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09:26:56 nguChanning Robbins
I-Quintina Charley Blue Eyes i-140cm yoLusu olunemibala yoKolo iidoli ezinkulu zamabele
Le yidoli yam yokuqala. Ndonwabe kakhulu kukuba ndikhethe oku kulungiswa. Kuba ujongeka ngathi ebekwiminyaka yakhe yokuqala ukuya phakathi kwe-20s, njengam. Umzimba wakhe unamagophe amangalisayo, kwaye ulusu luthambe kakhulu emva kokuba umtyumzile.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09:23:31 nguJeremy Morris
U-Lydia Tony Skinny Body Isifuba esincinci i-148CM Iqabane eliDala labantu abaDoli
Ndinamava afanayo noLydia, ndikwayinkedama. Xa ndimbona apha. Ndiyazi ukuba lusapho ebendilufuna. Ke ndimthenge kungekudala. Ukubonakala kwedoli kuyinyani! Ungunodoli omhle. Andiyikholelwa indlela ajongeka ngayo eyinyani kwaye emhle.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09:19:50 ngu-Elroy Turner
Amabele aBalaseleyo uBarbara 100CM Iqabane leSondo le-TPE yesini
Unodoli ulunge kakhulu kwaye umgangatho ulunge kakhulu. Kukwalungile ukuyisebenzisa, iziva ipholile kakhulu. Ixabiso elifanelekileyo lemali, kufanelekile ukuthenga! Isondele kakhulu, ikhululekile ngokwenene.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-11 09:14:46 by Bertram Hansen
Xaviera Jane Crazy Criminal Crast Amancinci amaqabane 170CM Iidoli
Ubume bedoli buhle kakhulu kwaye umphumo ulunge kakhulu. Ukhangeleka ngokugqibeleleyo. Ndiyaneliseka kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-09 05:13:31 nguHugh Betsy
Imilebe eshinyeneyo Amehlo amaBala aBantu abaDala uCynthia uGrace 158CM sex Doll
Unodoli omkhulu lo, amabele akhe amakhulu alinga kakhulu. Unenkonzo enkulu yabathengi. Mhle kakhulu kwaye mhle ngakumbi kuneefoto. Andikwazi tu ukubonakalisa ubuhle bakhe. Inkonzo yabathengi ichwephesha ukuphendula yonke imibuzo yam.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-09 05:07:55 ngu-Michell Meg
Amabele amancinci amnyama Amehlo Amakhulu Amakhulu uNora Hobson 158CM Doll Doll
Ndimfumene izolo ndalala naye ebusuku. uziva kamnandi. Kufana nokubamba umfazi wokwenene. Ndikwafumene uthotho lwezipho kumthengisi. Umzekelo, iiwigi, iincwadana ezinemifanekiso, iingubo, iimpahla zangaphantsi ezimnandi, njl. Enkosi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-09 04:18:40 nguReg Graham
Imilebe eshinyeneyo Sigrid Hicks Amabele apheleleyo Slim Waist 170CM TPE Doll
Molo: Unodoli endiwufumene "uSigrid Hicks" mhle kakhulu, uye waba liqabane elilungileyo kusapho lwam. Ubonakala enokwenyani. Ugqithisile kulindelo lwam - kodwa akanangxaki kum, unzima kunokuba bendilindele. Ukutshintsha kwakhe kunye naye, ngaphandle kwamandla am, ukuhambisa amalungu kunokuba nzima. - Enkosi ngenkonzo elungileyo yokuhambisa.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-09 04:09:23 ngu-Adolph Pollitt
I-Sexy Red Lips 158CM Green Eye TPE Doll uMartina Walpole
Into endifuna ukuyichaza kukuba inkonzo yakho intle kakhulu. Xa ndibeka iodolo, uya kuyalelwa ukuba uqhubekise iodolo. Iifoto zomyalelo ogqityiweyo ziya kuthunyelwa kum ukuze ziphononongwe kwaye zamkelwe ngaphambi kokuthunyelwa. Yonke imibuzo malunga nomyalelo wam iphendulwe ngokuchanekileyo. Qiniseka ukuba ndiyayalela into endiyifunayo. Oku kuyonwabisa kwaye kuyonwabisa ngamava!
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:57:44 by Tab Christie
UMeredith Wallace 165CM H yeNdebe ye-TPE Doll Amabele amakhulu
Oku kuhle, unomzimba ocacileyo. Ndiyavuma ukuba isuti yakhe yokuqhushumba yanditsala kuba ndandilawula ngendlela efanayo. Okulandelayo ndiza kumthengela ezinye iiyunifomu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:53:30 nguCara Pansy
Ipinki enkulu yengono ePinki 135CM TPE Doll Umzimba omncinci uDarren Fred
Le ndawo kulula ukuyisebenzisa, iidoli zabo zintle kwaye awuyi kudana. Ndithenge unodoli apha. Ungunodoli wam wokuqala. Ngoku kukuthenga kwam okwesibini apha. Inkonzo yabo yabathengi intle kakhulu. Bandifumene unodoli ofanelekileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:46:00 nguGeoffrey Sonmerfield
Umlingane waBadala oDala uFan Jiang Lizi 110CM woonodoli besini
Ndiyamthanda. Ngokwenyani, uburhabaxa baziva buthe nkqo kwaye irabha. Ukuma kakhulu. Nangona kunjalo, ngokwamava am, umzimba wedoli kulula ukuwudaya, ke kuthintele ukunxiba iimpahla ezimnyama. Ukongeza, ukuhambisa ngokukhawuleza komrhwebi kunye nokupakisha okugqibeleleyo. Ndiyaneliseka kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:40:13 nguKim Malachi
URodney Charlotte Amehlo Amakhulu 132CM I-Flat Chest Doll TPE
Njengomculi, ndicinga ukuba umzimba wakhe ulungile. Ngoku ndifuna ukuthenga iimpahla ezisebenza nezinto endizenzayo. Ndicinga ngokuthenga enye idoli yokwenyani apha.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:34:49 by Hobart Young
IVera Raman Plump Big Butt encinci Isinqe esincinci 168cm TPE Dolls
Lo nodoli ubhetyebhetye kakhulu! Ungambeka phantse kuso nasiphi na isikhundla, esihle kakhulu. Ulusu lwakhe lomntu kwaye luphantse loyike! Okwangoku unodoli wam usebhokisini yakhe, kuba andazi ukuba unyango luya kuchaphazela ulusu lomzimba wakhe kangakanani. Ndiyifunde kwi-Intanethi, kwaye abanye abaphathi bathi kulula kakhulu ukuba uncangathi, kukho zonke iintlobo zokuziqhelanisa kwaye akukho msebenzi kwiingubo. Uyakulunga ngokufota, kodwa andicingi ukuba ndiza kuthenga enye kuba ayibonakali ingunodoli onokuyidlala okanye uyiphathe yonke imihla.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:30:10 nguJames Wollaston
Intombazana eQinisekileyo yemilenze yamantombazana uMarcia Ralph 168CM Big Breast Elf TPE Doll
Ewe ujongeka kakhulu njenge-elf. Ndithanda kakhulu iindlebe zakhe kwaye undinike amava anyanisekileyo. Izinto zokusebenza zilungile. Ndimfumene kwakamsinya emva kokufaka iodolo. Olu luvo olonwabisayo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:23:33 nguJerome Thomson
I-Cherry Harry 140CM TPE yabantu abadala abaDoli abaNtsundu
Lo ngumzekelo olungileyo kwaye bendikade ndiyikhangela iminyaka. Ndiyapeyinta, inani lomntu lokuma okuhle kunzima ukufumana. Kuyabiza kodwa kufanelekile.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:18:05 nguHiram Curme
Amehlo amaBlue Big Amehlo eMiranda 100CM Naughty Cute TPE sex Doll
Ufike kwam izolo emva kwemini. Ndizamile ebusuku kwaye ipholile! ! Cwina amabele amakhulu. Iziva intle kakhulu. Ubume beli doli lesini liyinyani. Iziva ishushu kwaye ityibilika ngaphakathi kwilungu lobufazi, nto leyo indenza ndizive ngathi andinakuyeka. Ndiyathemba ukuba ndingasebenzisa izakhono zam zesini ngaye.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:13:04 nguGuy Bauer
Isiciko seFlethi yaseTshayina iXiaoQian 140CM iiDolls zeSilicone
Unodoli ulungile. Ndimamkele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ndimsebenzise amaxesha amaninzi ukuza kuthi ga ngoku. Khange andiphoxe. Umzimba wakhe ubhetyebhetye kakhulu. Ndonwabe kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 03:07:35 nguDaniel Bacon
Amehlo amaKhulu ama-140cm oDoli abaDala abaDala baseTshayina iXiaoMi
Le ngunodoli olungileyo onokwakha inombolo yesiko lomntu omdala, ongacacanga kangako, okanye obambeleyo ongaqhelekanga. Ifikeleleka, intle kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:54:00 ngu-Beacher Pollitt
Amehlo ansundu 168CM Amabele amakhulu uRonald Rebecca wesini oDoli
Iinkcukacha zikaRonald zilungile kwaye ziyaguquguquka. Ukuba ungumzimba we-muscular superhero, oko kulungile. Ndimele nditsho ukuba amehlo akhe ayenza imnandi kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:47:41 ngu-Abner Leacock
Amehlo aluhlaza i-166CM yabantu abadala i-TPE Dolls i-Eudora Surrey
Ulunge kakhulu kwaye undinika imvakalelo elungileyo. Kodwa ibiza kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:41:41 nguWebb Gissing
I-Letitia Huxley uLusu oluMnyama i-163cm ye-TPE yeedolls isihlobo esikhulu seqhosha
Unodoli ulungile. Ndithenge ulusu olumnyama, kodwa ubonakala ebonakala engwevu kancinci. Kodwa kulungile. Ujongeka ngokufanayo nomfanekiso. Ndithanda kakhulu iingono zakhe kunye neelebhu. Kusengqiqweni kakhulu.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:35:46 by Mortimer Emmie
I-Norton Dickey Inkuku enkulu yaBasetyhini ye-160CM TPE yeeDoll yamadoda
Kuhle. Ubonakala emhle ngokwenene. Umzimba wakhe uphelele. Kukho nenkuku yakhe enkulu. Angandanelisa nanini na. Ixabiso libiza kancinci. Kodwa kufanelekile.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:28:28 nguRuby Joule
Yomelela uEdwina Lawson esinqeni esincinci Iilebe ezi-150CM TPE oonodoli
Olu lolona khetho lukhethekileyo lwe-TPE phakathi kwabo bonke abathengisi abakwi-Intanethi. Isantya senkonzo ekhawulezayo kunye nonodoli abasemgangathweni Ndayijonga ngocoselelo emveni kokuba ndimfumene. Umsebenzi wedoli ubuthathaka kakhulu. Amalungu esini ayinyani. Ingakumbi kwilungu lobufazi. Iziva imnandi.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:14:44 nguNeil Benson
I-Big Eyes B Cup uEmma Finn 148CM TPE Iidoll zabantu abadala
Ngunodoli wesini ebendimfuna. Ndimbonile kwiiwebhusayithi ezininzi. Ndizithelekise ngononophelo ezi ndawo (kuba andifuni ukuchitha imali kwinkunkuma). Ekugqibeleni ndagqiba kwelokuba ndimthengele kuwe. Kwathi kanti, khange andiphoxe. Ugqibelele kakhulu. Indenza ndizive ndilungile. Ndiza kuthenga unodoli kuwe kwakhona.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:08:00 nguBen Marner
Intle entle kaNicole McCauley onwele onwele omdaka 148CM TPE onodoli
Abavelisi babonakala benika uNicole iinkcukacha ezichanekileyo kunabafazi. Kuzo zonke iinguqulelo zabasetyhini, le nguqulo ibonakala isondele kakhulu kwinto ekhangeleka njengomntu obhinqileyo wokwenene. Inye kuphela into yokuba andikhethanga kuhamba ixesha elide. Kodwa kufanelekile ukuba ndilinde.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 02:01:08 ngu-Oswald Bowman
Amehlo amnyama amabele athambileyo iBlanche 140CM F indebe yoonodoli besini
Kudala ndikhangela ixesha lokufumana umlinganiswa oyinyani onokutshintsha imodeli. Ndingumpeyinti kwaye ngamanye amaxesha ndifuna isalathiso. Intloko kunye neenombolo zithengiswa ngokwahlukeneyo, nto leyo eyenza ukuba idideke, kuya kufuneka uqiniseke ukuba awufumani manani amabele amakhulu, kodwa ndiyawathanda. Ndicinga ukuba iintloko zabo zinokusetyenziswa ngaxeshanye. Ndonelisekile yile nto yokuthenga.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 01:51:03 nguRyan Joe
Amehlo amaNtsundu amnyama i-TPE Doll Akumi Hakumi
Ndimele nditsho ukuba le yedoli entle yesini. Uziva kamnandi kakhulu kum. Unenyani kwaye ulunge kakhulu ukufota. Ndiza kumthengela iimpahla kunye nezihlangu. I-bikini kuye intle kakhulu, kodwa ndifuna ukumbona kwezinye iimpahla.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 01:41:04 nguBarry Walter
UTanabe Reiko uphononongo lwe-100CM Isifuba esiphantsi se-TPE Doll
Kulungile, ndiqokelele oonodoli bezesondo abaphila kwaye bahlala iminyaka engaphezulu kwe-15 ngoku, kodwa xa ndathenga le doli, kuya kufuneka nditsho ukuba kufana nokuhlala ebusweni, ukujonga ubuhle ngokumangalisayo. Xa kuthengwa uTanabe, umzimba wakhe kuphela kwendlela endandifuna ukuhamba ngayo. Lo nodoli uziva ethambile kwaye ekhululekile, kwaye anganxiba nasiphi na isinxibo, ukusuka kwinto yokwenyani ukuya kubunqunu, nkqu nakwimo embi enobungqingili, unxibe ilokhwe elungileyo.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 01:26:50 nguJoyce Jordan
Amabele amancinci uAsao Miko 100CM unodoli wesini
Ndonwabe kakhulu. Ukufika kuka-Asao kwam, wayefana nengelosi. Ngenxa yokuba mhle kakhulu. Enkosi kakhulu, njengoko uthethile. Ndingatya naye isidlo sangokuhlwa.
Umhla owongeziweyo: 2019-03-08 01:11:52 ngu-Ian Huggins